(No. 21, April 28, 2020)
၁။ လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်း ကျေးလက်ဒေသခံများ လူ၊ ကား ချောဆွဲခံနေရ
၂။ ရခိုင်ပြည်သူများ၏ ဒုက္ခကိုစာနာပြီး တိုက်ခိုက်မှုများ အမြန်ဆုံး ရပ်ရန် ALP တောင်းဆို
၃။ တပ်မတော်က NCA ကို ချိုးဖောက်ပြီး ပြည်သူလူထုကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေဆဲဟု သံလွင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဥယျာဉ် ကော်မတီ ပြော
၄။ ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွင်း ဥပဒေမဲ့ ကျူးလွန်မှုတွေကို စုံစမ်းပေးရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကချင်ကွန်ဂရက် တောင်းဆို
၅။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် ယခင်နှစ်များထက် သောက်သုံးရေရှားပါးမှု ပိုမိုကြုံတွေ့နေရ
၆။ မိလ္လာကျင်းတူးရာမှ မိသားစုလိုက် သေဆုံး
၇။ မူဆယ်မြို့ ပန်းဆေး ပြည်သူ့စစ်ပိုင် အဆောက်အဦး တိုက်ခိုက်ခံရ
၈။ ကချင်လူထုမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ကို အိမ်တွင်းဆုတောင်းခြင်းအစီစဉ်ဖြင့်သာ ပြုလုပ်ခဲ့ရ
၉။ တိုက်ပွဲများကြောင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်က ရွာ၂၀ နီးပါး ထွက်ပြေးနေရ
၁၀။ Covid-19 အရေး ပူးပေါင်းရန် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရက မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို တိုက်တွန်း
၁၁။ ဖားကန့်က ရေမဆေးကျောက် ရှာသူတွေကြား COVID-19 စိုးရိမ်
၁၂။ အတိုင်ပင်ခံ၏ ထုတ်ပြန်ချက် တပ်ဘက်ကို ထောက်ပြမထား၍ ချင်းအဖွဲ့အစည်းအချို့ဝေဖန်
၁၃။ အင်းလေးကန် ရေခမ်း စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲ နေ
၁၄။ မေလတွင် တောင်ယာခုတ်မှုမပြုလုပ်နိုင်ပါက ကပ်တဲလ်ရွာ၌ တစ်နှစ်စာ ရိက္ခာ အခက်အခဲဖြစ်နိုင်
၁၅။ ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိ Quarantine စင်တာက လူအချို့ အိမ်ပြန်ခွင့်ရရှိ
၁၆။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ မေ ၁၈ ပြန်စမည်
၁၇။ ပလက်ဝမြို့ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ရိက္ခာ တပ်မတော် အကူအညီဖြင့် ပို့မည်
၁၈။ တောင်ကြီး Covid-19 လူနာ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရ
၁၉။ ကူညီထောက်ပံ့မှု ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အပြင်ထွက်ခွင့်တားမြစ်ခံရခြင်းကြောင့် လီဒိုလမ်း စစ်ရှောင်များအခက်တွေ့
၂၀။ တပ်မတော်ငြင်းဆိုထားတဲ့ ကျောက်တော် မီးလောင်နေအိမ်တွေအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရ ငွေထောက်ပံ့
၂၁။ ၁ လကြာ ရပ်ထားသည့် မွန်ပြည်နယ် ခရီးသွားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ပြန်လည်စတင်
၂၂။ ဖားကန့်မြို့သို့ ဝင်လာသူများ ကိုယ့်စားရိတ်ဖြင့် ၂၁ ရက် Quarantine နေရမည်
၂၃။ လွိုင်ကော်မြို့က ၅ ရက်တဈေး နောင်ယားဈေးကို ပုံစံပြောင်းရောင်းချခိုင်း
၂၄။ မူဆယ်မြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဘေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး လဲကျသေဆုံး
၂၅။ ဘားအံမြို့တွင် မိုးသက်လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်တချို့ ခေါင်မိုးလန်ပျက်စီးပြီး ဓာတ်တိုင်များပြိုလဲကာ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်
၂၆။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ နယ်စပ် ပိတ်ထားမှုကြောင့် မူဆယ်မြို့နယ် မန့်ဟီးရိုးမြို့တွင် ပြောင်းဖူးတင်ထော်လာဂျီ အစီး ၄၀ဝ ခန့် ပိတ် မိနေ
၂၇။ ထိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် နေရပ်ပြန်မည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့် သွင်းရန်လို အပ်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ် မိုင်းကျက်အုပ်စုဘက်လှုပ်ရှားသည့်အစိုးရတပ်မတော်သည် ဒေသခံရွာသားများထံမှ ဝါး၊ သစ်များဆင့်ဆိုခြင်း ကား၊ထော်လာဂျီများအား ချောဆွဲခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်း ဒေသခံများပြောပြချက်အရသိရပါသည်။ လားရှိုးမြို့အရှေ့ဘက်ရှိ မိုင်းကျက်အုပ်စုတွင် အခြေချသည့် အစိုးရတပ်မတော် တပ်မ ၉၉ လက်အောက်ခံ ခမရ ၃၆၅ သည် မိုင်းကျက်ဒေသခံများထံမှ ကား၊ ထော်လာဂျီများ တရက်လျင် ၄ စီးဆင့်ဆိုချောဆွဲနေကြောင်း၊ မိုင်းယော်နှင့် မိုင်းကျက်ကြား ဝမ့်ခန် ၊ ပန်လျှော် ရွာဘက်ရှိ ၎င်းတို့တပ်စခန်းသို့ ပစ္စည်းများ တင်ပို့ပေးခိုင်းကြောင်း မိုင်းကျက်ဒေသခံ ဆန်စိုင်းဆာမ် ကပြော သည်။ “သူတို့ သုံးဖို့ ကား ၊ထော်လာဂျီတွေကို ဝမ့်လုံမိုင်းကျက်ကို နေ့တိုင်း စတန်းပိုင်သွားနေပေးရတယ်။ ကားသမား တယောက်ကို ပန်လျှော်က သူတို့စခန်းဆီပစ္စည်းပို့ခိုင်းတာ ၂၁ ရက်ကတည်းက သွားတယ် ၂၃ ရက်နေ့မှပြန်လွှတ်ပေးတယ် ” – ဟု ဆန်စိုင်းဆာမ် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောသည်။
ပန်လျှော်ရှိ အဆိုပါတပ်စခန်းသည် ယခင်က ကောင်းခါး ကေတီအေ ပြည်သူ့စစ်စခန်းချ နေထိုင်ကြောင်း၊ အစိုးရတပ်မတော်မှ ၎င်းတို့ဌာနချုပ်ဖြစ်သော ကွတ်ခိုင်မြို့ရှိ ကောင်းခါးရွာအား ဝင်ရောက်စစ်ဆေးကာ မူးယစ်ချက်ရုံများအားသိမ်း ဆည်းလိုက်ပြီး နောက် ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းကစပြီး ပန်လျှော်စခန်းအားလည်း အစိုးရတပ်က ဝင်ရောက်တပ်စခန်းချနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စခန်းပြုပြင်ဆောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော သစ်၊ ဝါးများ ပစ္စည်းများကို ဒေသခံများထံမှ ဆင့်ဆိုယူဆောင် နေကြောင်း မိုင်းယော်ဒေသခံ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောသည်။
ထိုသို့ လူထုမှ အဓမ္မလုပ်အားပေးနေရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် SHRF မှ စိုင်းဟော်ရှဲန်က – “လူထု အနေနဲ့တော့ ဒီလိုခံနေရတာ နှစ်ရှည်လများဖြစ်နေပြီ။ အစိုးရရဲ့တပ်မတော်ဘက်က ဖြူစင်တဲ့စေတနာသဘောထားရှိရင် စားပွဲဝိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်မှ ဒီအခုလို လူထု အဓမ္မအခွင့်အရေးကျူးလွန်ခံနေရတာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ဆိုရင် အခုလိုမျိုး တပ်မတော်က လူထုကိုလုပ်အားခိုင်းစေနေတာတွေဟာ စစ်ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ကျူး လွန်တာဘဲ ”- ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်အားပြောသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16298
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) ကပ်ရောဂါ အန္တရာယ်ကို တတိုင်းပြည်လုံး ညီညာစွာ ရင်ကြရမည်ဖြစ်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နှစ်ဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကို အမြန်ဆုံးရပ်ဆိုင်းပေးရန် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး ပါတီ (ALP) က ဧပြီလ ၂၃ ရက် တွင် ထပ်မံ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ALP သည် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၁၂ ရက်ကလည်း ယင်းသို့ တောင်းဆိုထားသေးသည်။ ဧပြီလ ၂၀ ရက် တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ ကားတစီး ပစ်ခတ်ခံရ၍ WHO ဝန်ထမ်းတဦး သေဆုံးပြီးနောက် အရပ်သား ပစ်ခတ်ခံ ရမှုများ ပိုမိုများလာပြီးနောက်တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ကာ တောင်းဆိုလိုက် ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ALP အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ခိုင်စိုးမြ က “ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်လည်း ဖြစ်နေတော့ လူတွေက အထိတ်တလန့်လည်း ဖြစ်နေရတယ်။ နောက်ပြီး စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အထိတ်တလန့် ဖြစ်နေတော့ လူတွေက နေစရာမရှိသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒီဥစ္စာကို နှစ်ဖက် စလုံး (AA နှင့် တပ်မတော်) က ကိုယ်ချင်းစာနာသင့်တယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားသည်။
ALP ၏ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP)မှ မူဝါဒရေးရာ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးထွန်းအောင်ကျော် က ALP ၏ တောင်းဆိုချက်များသည် လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေသည့် ကိစ္စများကို တောင်းဆိုထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးသည်။ ဦးထွန်းအောင်ကျော် က “ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူထု ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေက အရမ်းများလာပြီ။
ဒီပြဿနာက နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်တာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အထိခိုက်ဆုံးက အရပ်သားတွေပဲ အကြီးအကျယ် ခံနေရတာ။ ဒီအချက်တွေကြောင့် စစ်ရပ်စဲဖို့ တောင်းဆိုတာက သဘာဝကျတယ်။ လိုလည်း လိုအပ်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
ANP နှင့် ALP တို့က စစ်ပွဲရပ်ဆိုင်းရန် တောင်းဆိုမှုများရှိနေသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မြန်မာအင်စတီကျူ (MIPS) ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦးကမူ လက်တွေ့ မြေပြင်အခြေအနေတွင် နှစ်ဖက်စလုံးက အပစ်ရပ် မည့် အနေအထားရှိပုံ မရကြောင်း ပြောကြားသည်။ AA အဖွဲ့၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြောက်ဦးမြို့၌ ဌာနချုပ် ဖွင့်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု ပြောဆိုထားသည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ ပြောဆိုချက်အတိုင်းဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းလာမည့် အခြေအနေရှိပြီး တပ်မတော်ကလည်း ယင်းကြိုးပမ်းမှုကို တားဆီးမည့်အနေအထားရှိနေကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/25/221317.html
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်-NCAကို ချိုးဖောက်ပြီး ပြည်သူလူထုများကို တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သံလွင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဥယျာဉ်ကော်မတီက ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက် သည်။ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မူတရော်(ဖာပွန်)ခရိုင် (တပ်မဟာ ၅) ၊ လူသောမြို့နယ်ထဲတွင် ယခင်လ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသော စောသက်မီး၏ အောက်မေ့ဖွယ်အတွက် ယမန်နေ့ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန် သည့်စာ၌ ထိုသို့ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မချိုးဖောက်ဘဲ ဒေသတွင်းတင်း မာမှုများကို အကြမ်း မဖက်သောနည်းလမ်းနှင့် မှန်ကန်သောစိတ်ထားဖြင့် ဖြေရှင်းခဲ့လျှင် ပြည်သူနောက် ထပ်တစ်ဦး ထပ်မံဆုံးရှုံးရမည့် အဖြစ်ကို ရှောင်လွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။ သံလွင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဥယျာဉ်ကော်မတီ၏ ပြောခွင့်ရ နော်ဆာမူးက “နွေရာသီလို ပွင့်လင်း ရာသီရောက်ပြီးဆိုရင် စစ်တပ်က မူတရော် ဒေသမှာ သူတို့ရဲ့ တပ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပိုလုပ်လာလေ့ရှိတယ်။ အထူး သဖြင့် လမ်းဖောက် လုပ်တဲ့ကိစ္စလိုပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ပြောသလိုပဲ သူတို့ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ NCA အပစ်ရပ် စာချုပ်ကို သူတို့ မလေးစားဘူး။ ဆိုလိုတာက အဲ့ဒေသက ဒေသခံလူထုတွေရဲ့ တန်ဘိုးကို အလေးမထားတာပါပဲ။” ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော NCA စာချုပ်ပါ အခန်း(၃) အပိုဒ် ၉၏ အရပ်သားများ ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အရ ပြည်သူလူထုအား လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဂုဏ် သိက္ခာကို ထိပါးစေသည့် လုပ်ရပ်၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်း၊ လူသားမဆန်စွာပြုမှုခြင်း၊ အကျဉ်းချ ခြင်း၊သတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့် ဖျောက်ဖျက်ခြင်းမပြုလုပ်ရ ဟူ၍ပါရှိ သည်။ ထို့အပြင် အပိုဒ် (၉)၏ အပိုဒ်ခွဲ (ထ)အရလည်း အရပ်သား ပြည်သူများ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုမရှိပဲ အပစ်ရပ် နယ် မြေများအတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပြုရန်လည်း ဖော်ပြပါရှိသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1
မြန်မာတပ်မတော် အပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေမှာ အပြစ်မဲ့ အရပ်သားတွေအပေါ် ဥပဒေမဲ့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှုတွေကို နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ အစည်းအဝေး ဆင့်ခေါ်ဖို့ World Kachin Congress ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကချင်ကွန်ဂရက်က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ် ရေး မလုပ်နိုင်ဘဲ စစ်ပွဲတွေ ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်နေပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေဆုံးနေရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိ ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအခြေအနေတွေကို ဟန့်တားနိုင်ရေး လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ ၀င်ရောက်ကူညီဖို့ WKC ဥက္ကဋ္ဌ Gum San NSang က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင် ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်နိုင်တာက ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတခုပဲ ကျနော်တို့ မြင်နေ ရပါတယ်။ လူတွေ အများကြီး သေကျေပျက်စီးရတယ်။ ဒီလောက်ကြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ ဆုံးရှုံးရတာကို ကြည့်မနေဘဲနဲ့ တခုခုအဖြေရှာဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။” ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂပိုင် မော်တော်ကားတစီး အပါအ၀င် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူလူထု တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လက်နက်ကြီးတွေ ဗုံးကြဲ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန်ကွက်ရှုတ်ချ ကြောင်း WKC ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စစ်ဘေးကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ရခိုင်၊ ချင်းပြည်နယ်က ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ အခြေအနေကို အလွန်စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိကြောင်းလည်း ဥက္ကဋ္ဌ Gum San NSang က ပြောပါတယ်။
အရင် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကတည်းက ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွေက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ချေမှုန်း တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း အခု ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာစစ်တပ်က တိုက်ခိုက်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း Gum San NSang က ဆိုပါတယ်။ AA ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အပါအ၀င် ရှမ်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက ကိုဗစ်ရောဂါ ကပ်ဘေးကာလ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့က အဆိုပြုခဲ့ပေမယ့် မြန်မာတပ်မတော်ဘက်က ပယ်ချခဲ့ တာကြောင့် တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ ရှိပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/world-kachin-congress/5392981.html
April 25, 202၀
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ကျေးရွာအများစုတွင် မြစ်ချောင်းများနှင့် လက်တူးရေတွင်းများ ခန်းခြောက်လာ သည့်အတွက် ယခုနှစ်တွင် ယခင်နှစ်များက သောက်သုံးရေ အခက်အခဲပိုမိုကြုံတွေ့လာရသည်ဟု ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီနောက်ဆုံးပတ်မှစ၍ မြစ်ချောင်း စိမ့်စမ်းရေများနှင့် လက်ယက်တူးတွင်းများမှာ ရေခန်းခြောက်လာခဲ့ရာ ခလယ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်စု၊ တံခွန်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဝင်းရော်ဒေသရှိ ကျေးရွာများတွင် သုံးရေရှားပါးမှုအခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရ ပြီး ရေအလှူရှင်များ၏ ရေပေးဝေမှုများအပေါ်တွင်သာ မှီခိုနေရသည်ဟု ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
“ ရွာကတောတောင်တွေလည်းပြုန်းပြီး အစားထိုးအပင်တွေကြောင့် စိမ့်စမ်းရေ အရင်းမြစ်နေရာတွေ ရေအကုန်ခန်းခြောက် ကုန်တယ်။ ငယ်ငယ်က ရွာချောင်းတွေက ၁၂ လရာသီလုံးလုံး ရေရှိနေတယ်။ ကျွဲ နွားတွေ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်သုံးရေတွေ အတော်ဒုက္ခရောက်တယ်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့ ရေလိုက်ဝေတာ ၂ လခွဲလောက်ရှိသွားပြီး။ မနက် ၆ နာရီကနေ ညနေ ၉ နာရီအထိ ရွာပေါင်း ၁ဝ ရွာနီးပါး နေ့စဉ်ရေပို့ပေးရတယ်”ဟု ခလယ်ရွာ သောက်သုံးရေပေးဝေရေးပရဟိတအဖွဲ့ စောဘသော်က ဧပြီလ ၂၄ ရက်တွင် ကေအိုင်စီ သို့ပြောသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ကျေးရွာအများစုမှာ ဇမိမြစ်နှင့် ဝင်းရော်မြစ်ကြား တောင်ညို
တောင်တန်း၏ အရှေ့ဘက်တွင် ရွာအခြေ တည်ပြီး မိုးရာသီတွင် မြစ်ချောင်းရေနှင့် တောင်ကျရေကြောင့် ကျေးရွာအများစု ရေမြှုပ်ခံရကာ နွေရာသီတွင်လည်း နှစ်စဉ်ရေရှားပါးမှု ပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ ရေရှားတဲ့ရွာတွေကို ဒီနှစ်အဝီစီတွင်း ၆ တွင်း စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းမှုက ၈ ခု ရေကန်တွေအပါပေါ့နော် လုပ်ဆောင်ထား တယ်။ မြို့နယ်ရေပေးဝေရေးကော်မတီတွေ ဖွဲ့ထားတယ်။ ရေရှားတဲ့ရွာတွေ အသိပေးဖို့ ရွာတွေမှာလည်း ပြောထားတယ်။ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမယ်”ဟု ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး စောမြင့်အောင်လင်းက ယနေ့ (ဧပြီလ ၂၅ ရက်) ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ ဇမိမြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ကျေးရွာများတွင် အနက်တောင် ၃ဝ ကျော်အထိ လက်ယက်တူးတွင်းအများစု မှာ ရေခန်းခြောက်ကုန် ပြီးဖြစ်၍ သောက်သုံးရေရရှိရန် ချောင်း ကမ်းပါးများတွင် ယာယီ လက်ယက်တူးတွင်းများနှင့် အများ သုံးစွဲနိုင်သည့် ယာယီရေလှောင်ကန်များပြုလုပ်ထားကြရသည် ဟု ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%81%be%e1%80%8 0%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%84%e1
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ် ဆောင်ကြဲကျေးရွာတွင် အမျိုးသား (၄) ဦး မိလ္လာကျင်းတူးရင်း ပြုတ်ကျ သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့ ည ၆ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ဦးအိုက်လှ ၏ နေအိမ်ဝန်းတွင် မိလ္လာကျင်းအသစ်တူးရာမှ မိလ္လာကျင်း အဟောင်းမှ မစင်များထွက်ပြီး အောက်စီဂျင်ပျက်ကာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ဆင်းကယ်ကြရာမှ မိလ္လာကျင်းထဲ သေဆုံး ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သွားရောက်ကူညီသည့် သီပေါမြို့ဒေသခံ လူငယ်တစ်ဦး ကရှင်းပြသည်။ “ဖြစ်ပျက်သွားတာက နာရီဝက် လောက်ပဲ ကြာသွားတယ်။ ၄ ယောက်စလုံး သေဆုံးသွားကြတယ်”ဟု ၎င်းလူငယ် တစ်ဦးကပြောသည်။
မိလ္လာကျင်းထဲ သေဆုံးသွားသူများမှာ ဦးစိုင်းလှ အသက် (၄၈) နှစ် ၊သားဖြစ်သူ ဦးစိုင်းသီဟ အသက်( ၂၅) နှစ် ၊ သားဖြစ်သူ စိုင်းဇော်ဦးသာ အသက်( ၂၁ ) နှစ် နှင့် ဦးစိုင်းလှ နှင့် ဆွေးမျိုးတော်စပ်သူ မောင်မိုးအောင် အသက်( ၂၇ ) နှစ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သီပေါမြို့နယ် SNLD ပါတီဝင် စိုင်းလောဝ်ဆိုင်က ” ဒီလို မိလ္လာကျင်းတူးမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အားလုံး သတိထားဖို့ လိုတယ်။ တူးမယ်ဆိုရင်လည်း ကျင်း ဟောင်း နဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမှာ တူးရမယ်။ မဟုတ်ရင် အသက်အန္တရာယ် ထိ ရှိနိုင်တာပေါ့ နော်။ ခုဖြစ်သွားတာ ကျနော်တို့အားလုံးအတွက် သင်ခန်းစာ ယူသင့်တယ်။” ဟု ပြောသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ သီပေါမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ နယ်စည်းမခြားလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့မှ လူနာ တင်ယာဉ် ၁ စီးဖြင့် သီပေါမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shan news.org/archives/16284
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် ယမန်နေ့ ည ၇ နာရီခွဲက စွမ်စော်ရပ်ကွက်ရှိ ပန်းဆေး ပြည်သူ့စစ်ပိုင် အဆောက်အဦး တိုက်ခိုက်ခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ (ဧပြီ ၂၃) ည ၇ နာရီခွဲ ဝန်းကျင်က စွမ်စော်ရပ်ကွက်ရှိ ပန်းဆေး ပြည်သူ့စစ်ပိုင် အဆောက်အဦးထဲသို့ အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်ရောက်လာကာ ပစ်ခတ်သွားကြောင်း၊ ပြည်သူ့စစ် အဆောက်အဦး ဝင်းထဲသို့ ဗုံးသီးဟုယူဆရသည့် လက်နက် ၅ လုံး ကျကြောင်း မူဆယ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသူရိန် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ “လူထိခိုက်မှုကတော့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ပန်းဆေးပြည်သူ့စစ်ဝင်းထဲမှာ ၅ လုံးကျသွားတယ်။ ဗုံးလို့ယူဆရတယ်။ အခု သက်ဆိုင်တဲ့ တပ်နဲ့ ရဲကတော့ သွားရှင်းနေပါပြီ”ဟု ဦးသူရိန်က ပြောသည်။ လက်ရှိ အချိန်ထိ မည်သည့် အဖွဲ့က လာရောက် ပစ်သည်ကို သက်ဆိုင်ရာမှ စုံစမ်းနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးသူရိန်က ဆိုသည်။
အဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သည် ပန်းဆေး ပြည်သူ့စစ်ဝင်းအတွင်း ကားဖြင့် ရောက်လာပြီး ပစ်ခဲ့ကြောင်း ထိုပစ်မှုကြာင့် တရုတ်ပြည်တွင်းသို့ ကျည် တလုံးကျခဲ့ကြောင်း မူဆယ်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းကျော်သိန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ “ အဲ့နေရာက ကျနော်တို့ ဝင်ဖို့ခက်တဲ့နေရာပါ။ လူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အဆောက်အဦးထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ဝင်ခွင့်မရတော့ သေချာမသိဘူး” ဟု စိုင်းကျော်သိန်းက ပန်းဆေး ပြည်သူ့စစ်ပိုင် အဆောက်အဦး အခြေအနေကို ပြောပြသည်။
ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် အစိုးရတပ်မတော်မှ မူဆယ်မြို့နယ် အတွင်း လှုပ်ရှားနေသည့် ပြည်သူ့စစ်များကို ခေါ်ယူ ကာ တပ်မတော်မှ ချမှတ်ထားပေးသည့် နေရာသို့ ပြန်သွားကြရန် နှင့် မြို့မ ပြည်သူ့စစ်မှလွဲပြီး ကျန်ပြည်သူ့စစ်များ တပ်ပြည်ပ သို့ လက်နက်ခဲယမ်း ကိုင်ဆောင်သွားလာခြင်း မပြုရန် ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် မူဆယ်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် တရား မဝင် ဂိမ်းဆိုင်များ၊ လောင်းကစားရုံများလည်း ပိတ်ရန် ပြောဆိုခဲ့သေးသည်။ https://burmese.shannews.org/ar chives /16277
နှစ်စဉ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့သည် ကချင်လူထုမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (Anti-Drug Day) ဖြစ်သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် Covid-19 ရောဂါအခြေအနေကြောင့် လူထုဆုတောင်းပွဲမပြုလုပ်နိုင်ဘဲ မိမိအိမ်တွင်သာ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြ သည်ဟု သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဆိုးရွားလာသော မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရယ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန် ကချင်ခရစ်ယာန် အသင်းတော် အခြေပြု လူထုမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ Pat Jasan ကို ၂၀၁၄ တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်မှာ ယနေ့ ၆ နှစ်ပြည်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ မှစပြီး ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရပ်ကွက်မြို့ရွာအထိ ဘိန်းသုံးစွဲ ရောင်းဝယ်သူများကို ပညာပေးခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် ခဲ့ပြီး အထိမ်းအမှတ်နေ့ရောက်တိုင်း လူထုဆုတောင်းပွဲများကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
“ဒီနှစ်က လူစုလူဝေးနှင့်ကျင့်ပဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့ အားလုံးကိုယ်ရှိတဲ့အရပ်ကနေမှ မူးယစ်ဆေးကျေးကျွန်ဘ၀ မှ လွတ် မြောက်နိုင်ဖို့ နှင့် အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid-19 ရောဂါမှ လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အထူးဘဲဆုတောင်းကြဖို့ အဓိက ထုတ်ပြန်ထား တာဖြစ်တယ်” ဟု တနိုင်းအခြေပြု လူထုမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့မှ ဆရာနော်တောင် ပြောသည်။ စတင် ဖွဲ့စည်းချိန်မှ စပြီး မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေး စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သလို အခက်အခဲများလည်းရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးကို လူထုအဖွဲ့အစည်းများလုပ်နေသော်လည်း ပိုမိုထိရောက်ရန် အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု ဆရာနော်တောင်မှ ပြောသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအစီစဉ်ကို လာမည့်နှစ်များတွင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရေး ဆုတောင်းပေးဖို့ ယနေ့ ကချင်လူထုမူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ PJS က ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/25/%e1%80%80%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%84
တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) တို့ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းမှ ကျေးရွာပေါင်း ၂၀ နီးပါး အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာ၍ ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထွက်ပြေးနေရသော ကျေးရွာများမှာ ပုဏ္ဏားကျွန်း- ရသေ့တောင် ကားလမ်းမအနီးမှ ကျေးရွာများအပါအဝင် ယင်း မြို့နယ်အတွင်း ရန်ကုန်- စစ်တွေ ကားလမ်းမပေါ် ကျေးရွာများပင်ပါဝင်ကြောင်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်လတ် က ပြောသည်။ ဦးခင်မောင်လတ် က “အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရတဲ့ ရွာတွေကတော့ တော်တော်များတယ်။ တချို့ ရွာတွေဆို ရွာနားမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ပြေးတယ်။ တချို့ရွာတွေဆို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းလာလို့ ပြေးတာရှိတယ်၊ ရွာထဲကို လက်နက်ကြီး တွေ လာကျလို့ ပြေးတာ ရှိတယ်။ ရွာပေါင်း၂၀ နီးပါးလောက်က ပြည်သူတွေ အသက်လုပြီး ပြေးနေရတာ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်းပြင် ရန်ကုန် -စစ်တွေ ကားလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ ဂူဝကျေးရွာနှင့် နတ်ချောင်း၊ ရေ ပုတ်ချောင်း၊ တန်းစွယ်ကျေးရွာသား အများစုမှာလည်းနီးစပ်ရာ ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိရာသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံနေရ ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထိုအထဲမှ တချို့မှာ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ပေါ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းတချို့တွင် ဝင်ရောက် ခိုလှုံနေလျက်ရှိကြောင်းလည်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သန်းတင်က ပြောသည်။
ဧပြီလ ၁၃ ရက် မနက်ပိုင်းကလည်း အဆိုပါ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာ အတွင်းသို့ လက်နက်ကြီး ကျည်ဆန် ၃ လုံး ကျရောက် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အရပ်သား ၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၀ ဦးကျော် ပြင်းထန်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သည့်အတွက် လက်ရှိအချိန်အထိ ဆေးကုသမှုကို ခံယူနေရသည်။ ဒေသခံ ကျေးရွာသားများနှင့် ထိခိုက်သေဆုံးသွားသူ မိသားစုဝင်များက အဆိုပါ ကျေးရွာအတွင်းသို့ ကျရောက်သည့် လက်နက်ကြီးမှာ ကျေးရွာနှင့် ၂ မိုင်ခွဲကျော်အကွာတွင် တည်ရှိသည့် ပုဏ္ဏားကျွန်း အခြေစိုက် အမှတ် ၅၅၀ ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ကျောက်ဆိပ် ကျေးရွာ အတွင်း လက်နက်ကြီး ကျည်ဆန် ကျရောက် ပေါက်ကွဲသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီ (ANP) က ဧပြီလ ၁၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့် သဘောထားကြေညာချက် တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ https://burma.irrawaddy.co m/news/202 0/04/25/221331.html
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ပြည်တော်ပြန်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင်နယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်သည့် မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်မှသာ ဝင်ရောက်သင့်ပါကြောင်းနှင့် လက်ရှိအချိန်တွင် Covid-19 ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ဘုရားသုံးဆူနယ် စပ်ဂိတ်မှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပါကလည်း တရားဝင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်စေရေးအတွက် မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်မှသာ ဝင်/ထွက်စေရေး ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်သွားရန် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး နေထွဋ်ဦးက ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဧပြီလ(၂၁) ရက်စွဲဖြင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီသို့ အကြောင်းကြား စာပေးပို့ခဲ့ကြောင်း မွန်သတင်းအေဂျင်စီက မိတ္တူ လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြည်တွင်းရေးရာဌာနတာဝန်ခံ နိုင်ဗညားလယ်က “လာမယ့် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ဝင်လာမယ့် လူတွေက မြဝတီဘက်ကနေ ဝင်လာမှာပါ၊ အစိုးရက သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့ CBFQ မှာပဲ ထားမယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ဘက်ကို ရောက်ဖို့က သိပ်မရှိဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း CBFQ မှာနေဖို့အတွက်က စီစဉ်ထား ပြီးသားပါ”ဟု မွန်သတင်းအေဂျင်စီနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တစ်ရပ်တွင် ဖြေကြားခဲ့သည်။ ထို့အတူ COVID 19 ကူးစက် ရောဂါ အန္တရာယ် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှ နေရပ်ပြန်မြန်မာအလုပ်သမားများအနေဖြင့် တရားဝင်မြဝတီ နယ်စပ်ဂိတ်မှ ပြန်လာကြရန်နှင့် ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်လမ်းကြောင်းဘက်သို့ ပြန်လာခွင့်မပြုရန် ဧပြီ ၂၅ ရက်စွဲဖြင့် မွန်ပြည်သစ် ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်က ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့ ညွှန်ကြားလိုက်သည်။
ဧပြီ ၃၀ နောက်ပိုင်း နယ်စပ်မှတဆင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဖြစ်မနေ နေရပ်ပြန်ရမည့် အလုပ်သမားများ အင်အား စာရင်းကို သိရှိပြီး အခက်အခဲမရှိစေဘဲ နေရပ်ပြန်နိုင်စေရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သည့် အစီအမံများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် https://forms.gle/kbxdZLLVbmDM7NYJ9 သို့ မပျက်မကွက်ဖြည့်သွင်း ပေးပို့ ကြပါရန် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမား သံအရာရှိရုံးက ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမား များအား မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးနိူးဆော်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news72454
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ဒေသမှာ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတော့ COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကို ကြိုတင် ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ လုပ်ငန်းခွင်အပြင်ထွက်ခွင့် ပိတ်ထားပါတယ်။ အပြင်လူလည်း မ၀င်ရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျန်းမာရေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ ဖားကန့်မြို့နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်အမတ် ဦးတင့်စိုးက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ဒီကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဟာ ဒီလုပ်ငန်းခွင်က လွဲပြီးရင် သူတို့ကုမ္ပဏီဆိုက်ရဲ့ အပြင်ကို ထွက်ခွင့် လုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျ။ ကုမ္ပဏီ အတွက် နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမှ အ၀ယ်ထွက်တဲ့လူရယ်၊ ယာဉ်မောင်းရယ် ဒီလူတွေကိုပဲ သူတို့ အပြင် ထွက်ခွင့်ပေးပါတယ်။” ၂၄ နာရီ အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် စီမံကိန်းချ ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပေမယ့်လည်း ဒီ ကျောက်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ မြေစာပုံတွေမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရေမဆေးကျောက် ရှာကြသူတွေအတွက်တော့ ကာကွယ်တားဆီးရေး မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဖားကန့် ကို အ၀င်အထွက်လုပ်မယ့် ကားတွေကို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်ပစ်မြေစာပုံတွေထဲမှာ ရေမဆေး ကျောက်ရှာဖွေပြီး စားဝတ်နေရေး ရပ်တည်ကြတဲ့ လူထုအတွက် အစိုးရရဲ့ COVID-19 ကာလ အထောက်အပံ့ ကလည်း မလုံလောက်ဘူးလို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးတင့်စိုးက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ ပထမဆုံး COVID-19 ကူးစက်ခံ အတည်ပြုလူနာတဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် လူထူထပ်ပြီး ထိန်းသိမ်းရခက်တဲ့ ဖားကန့်လို ဒေသမျိုးတွေအတွက် စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ ရန်ကုန်က စက်ရုံတခုမှာ အလုပ် လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းကို ပြန်လာသူတဦးမှာ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး မြစ်ကြီးနားဆေးရုံကို ပြောင်းရွှေ့ ကုသပေးနေကြောင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက တနင်္ဂနွေနေ့ညက သတင်း ထုတ်ထားပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/covid19-hpakant/5392976.html
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး၏ ဧပြီ ၂၁ရက် ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) ဘက်ကိုသာ ထောက်ပြထားပြီး မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်ကို ထောက်ပြထားခြင်းမရှိသဖြင့် မျှတမှုမရှိကြောင်း ချင်းအဖွဲ့အစည်းအချို့က ဝေဖန်ကြသည်။ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်ရှိ ပြည်သူများအတွက် ရိက္ခာဆန်များကို ဧပြီ ၁၉ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိအောင် ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ “ဒီ ထုတ်ပြန်ချက်က တစ်ဘက်ကနေကြည့် ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် AA ဘက်ကို ထောက်ပြသလိုမျိုး မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်ကိုလည်း အညီအမျှ မဟုတ်နိုင်ရင်တော့ အနည်းအကျဉ်းတော့ ထောက်ပြသင့်တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်”ဟုလည်း ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဆလိုင်းကျဲအိုဘိခ်ထောင်က ပြောသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ထောက်ပြမှုအပိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်ရှိနေကြောင်း၊ တပ်မတော်၏ လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့် တစ်လ အတွင်း လူသုံးဆယ်ဝန်းကျင် သေဆုံးခဲ့ရခြင်းမျိုးကိုလည်း ထောက်ပြသင့်သည်ဟု မြင်ကြောင်း ဆလိုင်းကျဲအိုဘိခ်ထောင်က ဆိုသည်။ “(တပ်နှင့် AA ) နှစ်ဘက်စလုံးက စစ်ရာဇဝတ်မှုကို ကျူးလွန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်ဘက်စလုံးကို တန်းတူ ထောက်ပြသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်” ဟု ဆလိုင်းကျဲအိုဘိခ်ထောင်က ပြောသည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ULA/AA က ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်အတွင်း အဖျက်အမှောင့်လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်နေ သဖြင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက် အသက်စွန့်ပြီး ရွပ်ရွပ် ချွံချွံ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော တပ်မတော်သား အရာရှိ၊ စစ်သည်များအားလုံးကို အသိအမှတ်ပြု ချီးကျူးဂုဏ်ပြု ကြောင်း ပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် အရပ်သားများ သေဆုံး/ဒဏ်ရာရရှိမှု ဖြစ်စဉ်များ ကြားသိရသည့်အတွက် များစွာဝမ်းနည်း စိတ်မ ကောင်းဖြစ်ရကြောင်း၊ ၎င်းတို့နှင့် မိသားစုဝင်များအတွက်လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် လိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးကူညီ ထောက်ပံ့ မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပါဝင်သည်။
ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှ ဆန်နှင်းလျန်က “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပလက်ဝကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်တာ တွေ့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာတယ်၊ ကြိုလည်းကြိုဆိုတယ်၊ ဒါပေမယ့် ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုလုံးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သိပ်အားမကောင်းဘူးလို့မြင်ရတယ်”ဟု ပြောသည်။ စစ်ပွဲများကြောင့် ကျေးရွာများမှ ဒေသခံများမှာ ပလက်ဝမြို့နှင့် ဆမီးမြို့ တို့တွင် စစ်ရှောင်နေရပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ဆမီးတွင် ၂၈၀ဝ ပလက်ဝတွင် ၃၆၅၇ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။ https://www. bnionline.net/mm/news-72380
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိ အင်းလေးကန်ကြီး ရေခမ်းခြောက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံများ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးမှုခက်ခဲနေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောဆိုကြသည်။ အင်လေးဒေသခံများသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ “အင်းလယ်တွေ ရေခမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ စိုက်ပျိုးရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လယ်သမားတွေက တော်တော်လေးကို ဒုက္ခရောက်ပြီး စက်လှေတွေနဲ့ ခုတ်ပြီးမှ ရေတင်နေရတာ အဲ့ဒီလို အခြေ အနေ ဖြစ်နေတယ်။ ရေက တအားကို ခမ်းနေတာ အဘ တို့ဒီမှာ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ သွားရတဲ့ လမ်းကြောင်းကလည်း ခက်ခဲတယ်။” ဟု အင်းလေးဒေသခံ စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူ ဦးဖိုးလေး ကပြောသည်။
တပေါင်း တန်ခူးလအတွင်း မိုးမရွာခဲ့ပါက အင်းလယ်ရေထည့်ချိန်တွင် အခက်အခဲဖြစ်ရပြီး လယ်ရေသွင်းရာတွင်လည်း ၃ ရက် တစ်ခါ ရေပြန်ခုတ်တင် နေရကြောင်း ဒေသခံများက ပြောဆိုကြသည်။ “လယ်ထဲမှာ ရေက ကြာကြာမနေဘူး ၃ ရက် လောက်ပဲနေတယ်။ ရေက ပြန်ခမ်းရင် ပြန်ခုတ် ဝင့် ( မလိုအပ်သည့်မြက်ပင်) နုတ်တဲ့ချိန်မှာလဲ လယ်ထဲကို ရေပြန်ထည့်ရ တယ်” ဟုအင်းလေး ဒေသခံ တောင်သူ တဦးက ပြောသည်။ အင်းလေး ရေခမ်းခြောက်မှုသည် နှစ်စဉ် နွေရာသီရောက်တိုင်း ကြုံတွေ့ရသော်လည်း ယခုနှစ်သည် ပိုပြီးခမ်းခြောက်ကာ လယ်ယာအတွက် အခက်အခုကြုံဒုက္ခရောက်ကြောင်းလည်း အဆိုပါ တောင်သူက ဆိုသည်။
“အင်းလေးကန်ကလည်း ရေခမ်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကလည်း မလုပ်နိုင်၊ နောက် ကိုဗစ်ကြောင့် ဧည့်သည်ကမရှိ။ ဝင်ငွေ မရှိဘူး။ ဒီနှစ်တော့ ဝင်ငွေတွေမရှိဘူး။ အရမ်းခက်ခဲတယ်”ဟု အင်းလေးကန်ကို မှီတင်းလုပ်ကိုင်နေသည့် မသန္တာ က ပြော သည်။ အင်းလေး ဒေသခံ ပြည်သူများသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် တောင်ယာ အလုပ်အကိုင် ကို အဓိက လုပ်ကိုင်သည့် သူများဖြစ်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16279
ပထမဆုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေ့ရှိထားသည့် ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်၊ ကပ်တဲလ်ရွာသည် မေလတွင် တောင်ယာခုတ်မှု၊ စိုက်ပျိုးမှုမပြုလုပ်နိုင်ပါက တစ်နှစ်စာရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်နိုင်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဦးပေါင်လွန်မင့်ထန်က ပြောသည်။ “ဒါပေမယ့် ဒီကြားထဲမှာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တာတွေ တောင်ယာမခုတ်နိုင်တာတွေ တော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဂယက်က နောက်တစ်နှစ်မှာရှိလာနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် နောက်လာမယ့်အချိန်မှာ လာမယ့်နှစ်မှာတော့ ဝမ်းစာဖူလုံရေးက သက်သက်စဉ်းစားရတော့မယ်။ ဝမ်းစာဖူလုံရေးဆိုတာက ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာ အများကြီး စဉ်းစားပေးရတော့မယ်။” ဟု ဦးပေါင်လွန်မင့်ထန် က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် တစ်ပတ်ကို သုံးရက်ခန့် မိုးရွာနေပြီဖြစ်၍ စပါးပျိူးကြဲမှုကို အစိုးရခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တစ်အိမ်ထောင်လျှင် သုံး‌ယောက် နှုန်းဖြင့် ပျိူးကြဲခွင့် ပေးထားသော်လည်း ပေါင်းရှင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်းသူက ဆိုသည်။ “ မျိုးစေ့ချတာပဲရှိတယ်။ ကျန်တာက ပေါင်းရှင်းဖို့ ခွင့်ပြုချက်မရနိုင်ဘူး။ သက်ဆိုင်ရာက ခွင့်ပြုလိုက်တာက မျိုးစေ့ချတာလောက်ပဲရှိတယ်။ တောင်ယာ ဘက်မှာ ပေါင်းရှင်းဖို့ ဘယ်သူမှ ခွင့်မပြုသေးဘူး။ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်တောင်ယာဆီသွားကုန်ရင် ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ကုန် မှာစိုးလို့ အဲဒီလို အတားအဆီးလုပ်ထားတာ။ ဆက်ဖြစ်မှာက အများကြီး တစ်နှစ်စာ ဝမ်းစာအတွက် ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာ။” ဟု ဦးဒိုဇွာတောင် က ပြောသည်။
ကပ်တဲလ်ရွာသည် အိမ်ခြေ ၆၉၄ အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ ၃၆၁၁ ဦးနေထိုင်ကာ လယ်ဧက ၁၂၀ နီးပါးရှိပြီး မွေးမြူရေးနှင့် တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီး အဓိကစိုက်ပျိုးမှုအနေဖြင့် စပါး၊ ပြောင်းဖူးနှင့် ပဲများကိုစိုက်ပျိုးကြောင်းနှင့် တမူးနယ်စပ်မှတဆင့် အိန္ဒိယသို့ အများဆုံးတင်ပို့ကာ လေးပုံ တစ်ပုံသာ တီးတိန်မြို့သို့ တင်ပို့ကြောင်းသိရသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/69344
ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေ လိုင်ဇာမြို့အနီး မိုင်ဆပ်ပါ Quarantine စင်တာတွင် သီးခြားထားရှိကာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်ထားသူ ၁၈ ဦးရှိသည့်အနက် ၆ ဦး အိမ်ပြန်ခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဖျားနာသည့် လူနာ များ Quarantine စင်တာ နှင့် ဆေးရုံတို့တွင် ထပ်မံရောက်ရှိလာခြင်း မရှိတော့ကြောင်း လိုင်ဇာမြို့ COVID-19 ကာကွယ် တားဆီးရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဟိန်ဝေါမ်က ပြောသည်။ “အကုန်လုံးက သတိထားပြီးနေထိုင်ကြတာကို တွေ့ရပါ တယ်” ဟု ဦးဟိန်ဝေါမ်က ဆိုသည်။
Quarantine စင်တာတွင် သံသယလူနာ ၃ ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့ကို လိုင်ဇာမြို့ရှိ သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း၊ ၎င်းတို့တွင် COVID ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိရကြောင်း ဦးဟိန်ဝေါမ်က ပြောသည်။ ”ပထမသံသယလူနာကို ကျွန်တော်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်း ဆေးစစ်တာ Negative ဖြစ်ပြီဆိုတော့ ကျန်တဲ့သူတွေကို မစစ်တော့ ဘူး။ နှစ်ခါအတည်ပြန်ပြုတော့လည်း Negative ပဲဖြစ်တော့ Negative ပဲလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီ”ဟု ဦးဟိန်ဝေါမ်က ပြောသည်။
သံသယလူနာများတွင် ကိုယ်ပူသည့် လက္ခဏာများမတွေ့ရတော့ကြောင်း နှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် Quarantine ရက်ကာလ ကုန်လွန်ပါက အိမ်ပြန်ခွင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72446
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေဆဲကာလဖြစ်ပေမယ့် ရပ်နားထားတဲ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေကို မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ပြန်စဖို့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဘတ်ဂျတ်ကိစ္စတွေ အတည်ပြုဖို့ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရတာဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် ကျန်းမာရေး ကာ ကွယ်မှုရဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကြောင့် ရပ်နားထား ရတဲ့ ၁၆ ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာငွေ အရသုံးနဲ့ ဖြည့်စွက်ဘတ်ဂျက် အပါအဝင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ကုသရေးအတွက် အသုံးပြုဖို့ ချေးငွေကိစ္စ တွေကို ဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ်။
NLD ပါတီဝင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီက ဒေါက်တာ လှမိုးက အစိုးရက ဆောင်ရွက်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေ မရပ်တန့်ဖို့ လွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးရမယ့် ဘတ်ဂျက်ကိစ္စတွေရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ “ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေရဲ့ ဖြည့်စွက်ရန်ပုံငွေတွေကို ဆွေးနွေး အတည်ပြုကြမှာပါ။ ပြီးတော့ ချေးငွေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါ အစိုးရက တင်လာခဲ့ရင်လည်း ကျနော်တို့က အတည်ပြုပေးကြရမှာပါ။ မဟုတ်လို့ရှိရင် အစိုးရမှာ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတချို့က ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ လုပ်နေတဲ့ စီမံကိန်းတွေ ဘာတွေမှာ လုပ်ရင်းတန်းလန်းနဲ့မှ လိုအပ်ချက်ရှိလာ တာတွေ ရှိတယ်။ ဥပမာ ဝန်ထမ်း တိုးမြှင့် ခန့်ထားတာတွေရှိတယ်။ အရေးပေါ် စီမံချက်တွေရှိတယ်။ ဒါတွေအတွက် ဘတ်ဂျက်တွေကို ပြန်ပြီးအတည်ပြုပေးရမှာပါ။” ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေ ပြန်လည်ကျင်းပဖို့ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ မနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
နေပြည်တော်ကိုပြန်လာတဲ့ အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အရပ်သားတွေကို စောင့်ကြည့်ရေး စခန်းတွေမှာ ၂၁ ရက် အသွားအလာ ကန့်သတ်တာတွေရှိပေမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ အဲဒီပုံစံမျိုး ထားဖို့မရှိဘဲ တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်စိုးက အစည်းအဝေး တက်ရောက်မယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေတွေမှာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဖို့ရှိ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက လွှတ်တော်တစ်ရပ် ခေါ်ယူဖို့ ၂၁ ရက် ကြိုတင် အကြောင်းကြားရတာဖြစ်လို့ အခုလိုရက်သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြောင်းပြောပါတယ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းအေးက ဒီလိုကာလမျိုးမှာလူစုလူဝေးနဲ့လုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးတွေ ရှောင်သင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ SNLD ပါတီက လူငယ်ပိုင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ လွှတ်တော်တက်ရောက်ဖို့ရှိပြီး လူကြီးပိုင်း လွှတ်တော် အမတ်တွေတော့ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို မသိသေးဘူးလို့လည်း ဦးစိုင်းထွန်းအေးက ပြောပါတယ်။ ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ က ကွမ်းလုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဦးယန်ကျင်းကန် က လိုအပ်ချက်အရ လွှတ်တော် ခေါ်ယူတာဖြစ်လို့ ကျန်းမာရေး အစီအမံတွေ ပြင်ဆင်ထား မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
လွှတ်တော်ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ၊ လွှတ်တော်ကျင်းပရေးလုပ်ငန်း အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းကော်မတီ ခုနှစ်ခု အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း လွှတ်တော်ခေါ်ယူရေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ တာဝန် ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။https://www.rfa.org/burmese/news/hluttaws-will-start-on-may1804272020044936.html
ပလက်ဝမြို့ပေါ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများနှင့် ဒေသခံများအတွက် စားနပ်ရိက္ခာအပါအဝင် ဆန်အိတ်ပေါင်း ၂၀ဝ၀ ကို တပ်မတော် အကူအညီဖြင့် ပို့ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က ပြော သည်။“တပ်မတော်ကနေ မပို့ဘူးဆိုရင် မရောက်နိုင်ဘူးလေ။ အရပ်ဖက်ကားတွေက ဘယ်သူမှ မသွားရဲကျတော့ ပထမ ဆန်အိတ် ၈၃၀ သယ်တုန်းကတောင်မှ ကားသမားတွေ ကားဆရာတွေ မနည်းစည်းရုံးပြီးမှ ကိုယ်တိုင် ဆမီးမှာ သေချာပြင်ဆင် ခဲ့လို့သာ ရောက်သွားနိုင်တာ၊ အခုက ကားယာဉ်မောင်းတွေလည်း မသွားရဲတော့ဘူး၊ အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်မတော် ကား တွေကနေ ကူညီပေးပြီး ပို့ပေးဖို့လိုတယ်၊ တပ်မတော်က လုံခြုံရေးတွေနဲ့ ကားတွေနဲ့ ပို့ပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေ လုပ်နေတယ်”ဟုပြောသည်။ စားနပ်ရိက္ခာများအပြင် အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများလည်းပါဝင်ပြီး၊ ၎င်းပစ္စည်းတို့ကိုလည်း သယ်ယူပို့ဆောင် ပေးနေပြီ ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “ဆန်အိတ်နှစ်ထောင်နဲ့ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ကြက်သွန် အချိုးကျပို့ဖို့ လုပ်ထားတယ် ။ ခေါက်ဆွဲထုတ်တို့ အိမ်သာခွက်တို့ ဖိနပ်တို့ ဆပ်ပြာတို့ ပို့ဖို့လုပ်ထားတယ်၊ အရင်ပထမ အကြိမ် ၈၃၀ အိတ်ပို့ပေးပြီ၊ အခုဆန်အိတ် ၂၀ဝ၀ ထပ်ပို့ မှာဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလည်း ဆန်အိတ် တစ်ထောင် ပခုက္ကူကနေပို့ဖို့ လုပ်နေတယ်။ ပလက်ဝကို ရောက်ရင် အိတ်သုံးထောင် ရောက်မှာဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။ လက်ရှိပလက်ဝမြို့ပေါ်တွင် စစ်ဘေးရှောင် လေးထောင် နီးပါးရှိပြီး လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ရိက္ခာ ပြတ်လပ်နေသည်မှာ သုံးလဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်သည်။ https://www. bnionline.net/mm/news-72450
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ရှိ စဝ်စံထွန်း ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသ ခံယူနေသည့် Covid-19 လူနာ အမှတ် (၂၉) ဆေးရုံ ဆင့်ခွင့်ရကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ အဆိုပါ လူနာ အမှတ်(၂၉)၏ ဓါတ်ခွဲနမူနာ ၃ ကြိမ် စစ်ဆေးရာ Negative ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်အထူးရောဂါ နိမ်နင်းရေးဌာန လက်ထောက် ညွန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာနှင်းအိဖြူက သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ “Case -29 ကိုယ်တိုင်ကတော့ ၃ ကြိမ်ပြည့်မှာ Negative ထွက်တယ်။ သူ့ကို ဒီနေ့ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ပေးတော့မယ်။ ဆေးရုံက ဆင်းပြီးတော့ facility quarantine ဟိုတယ် တခုမှာ တပတ်ထပ်ထားမယ်။” ဟု ဒေါက်တာနှင်းအိဖြူကပြောသည်။
ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် လူနာအမှတ် ၂၉ ၏ မိသားစု ဝင်များကို ဓါတ်ခွဲနမူနာ ထပ်မံ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “Case 29 ရဲ့ မိသားစုက ဒီနေ့ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဓါတ်ခွဲ နမူနာ ထပ်ယူပြီးတော့ စစ်မယ်”ဟု ဒေါက်တာနှင်းအိဖြူကပြောသည်။ လူနာအမှတ်(၂၉)သည် အသက် (၂၆) နှစ် အမျိုးသားဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်ပြန် ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ကာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ရောက်ရှိလာပြီး ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ တစ်ဆင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ သတ်မှတ် ထားသော Facility Quarantine ပြုလုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16303
ကချင်ပြည်နယ် ဟူးကောင့်ချိုင့်ဝှမ်းဒေသ လီဒိုလမ်းမပေါ်ရှိ စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် Covid-19 ကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲ လာနေကြောင်း စခန်းတာဝန်ခံများမှ သိရသည်။ အောင်ရာကျေးရွာနှင့် ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာရှိ စစ်ရှောင်ပြည်သူများကို လာရောက် ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းမရှိတော့သည့်အပြင် စခန်းအပြင်ထွက် ရှာဖွေစားသောက်ရန်လည်း အဝင်အထွက် တင်းကြပ် လိုက်သဖြင့် ယခုလို ခက်ခဲလာရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရှဒူးဇွပ်ကျေးရွာ စစ်ရှောင်တာဝန်ခံ Sara Htoi Aung ပြောသည်။
“အခုချိန်မှာ စစ်ရှောင်တွေက အစားအသောက်အရမ်းခက်ခဲလာတယ်။ လိုအပ်နေတာကလည်း အခြေခံအစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားတွေပေါ့။ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ အပြင်ထွက်လို့မရသလို နေ့စားသွားပြီး အလုပ်လုပ်လို့လည်း မရတော့ဘူး။ နေ့စားခေါ်လုပ်မယ့် သူတွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ အရင်တုန်းကတော့ နေ့ထွက်အလုပ်လုပ်ရ တော့ ထောက်ပံ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမလာရင်လည်း သိပ်ခက်ခဲမှုမရှိဘူး။ အခုက အပြင်ကို တစ်ညထွက် အိပ်တာနဲ့တင် စခန်းကိုဝင်လို့မရတော့ဘူး။ အဲ့တော့ အခက်အခဲတွေ ပိုများလာတော့ပါ” ဟု ပြောသည်။
စစ်ရှောင်စခန်းတည်ရှိသည့် ကျေးရွာ ၂ခုမှာ ဝါရာဇွပ်ကျေးရွာအုပ်စုအောက်တွင်ရှိပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် စခန်းအပြင်ထွက် အလုပ် လုပ်ကိုင် စားသောက်နေသူများကြောင်း သိရသည်။ မြို့ဖြင့်ဝေးသည့် စစ်ရှောင်စခန်းဖြစ်သောကြောင့် ဝယ်ယူထားသည့် အဖျားတိုင်းကိရိယာများပင် အရည်သွေးမမှီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်းစခန်းတာဝန်ခံ တစ်ဦးပြောသည်။
အောင်ရာနှင့် ရှဒူးဇွပ် စစ်ရှောင်စခန်း ၂ ခုတွင် စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၂၀၀ ခန့် ခိုလှုံနေသည်ဟု သိရသည်။ ၎င်း စစ်ရှောင်များမှာ ၂၀၁၇ခုနှစ် နှောင်းပိုင်း တနိုင်းလီဒိုလမ်းမတစ်လျှောက် တပ်မတော်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ တိုက်ပွဲပြင်း ထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် လက်ရှိစစ်ရှောင်စခန်းတွင် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့သည်မှာ ၃ နှစ်ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/24/%e1%80%80%e1%80%b0%e1%80%8a%e1%80%ae%e1
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် တင်းမကျေးရွာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က တပ်မတော်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက စွပ်စွဲထားတဲ့ နေအိမ် ၅၀ဝ ကျော်ကို ပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် ငွေကျပ် သိန်း ၉၀ဝ ကျော်ကို အစိုးရက ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့က ပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ မီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ နေအိမ်တွေအတွက် အဓိက ထောက်ပံ့ပေးတာလို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းဇော်ဌေးက RFA ကို ဒီနေ့ပြောဆိုပါတယ်။
“ကျောက်တော်မြို့နယ် တင်းမကျေးရွာအုပ်စု၊ တင်းမကျေးရွာမှာ လူနေအိမ် ၅၂၈ လုံး မီးလောင်ခဲ့တယ်။ နေအိမ် ၃၉၇ လုံး အတွက်ကို အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးငွေ ၇၉၄ သိန်း၊ ပြီးတော့မှ နေအိမ် ၁၃၁ လုံးအတွက်ကို အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း တန်ဖိုး ငွေက ၁၃၁ သိန်းနဲ့ စုစုပေါင်း အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးငွေ ၉၂၅ သိန်းကို မြောက်ဦးခရိုင်ဘေးစီမံဌာနကနေပြီးတော့ ဧပြီလ ၂၂ ရက်က ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်” ဝါးအိမ်ကို တစ်သိန်း၊ သွပ်မိုးပျဉ်ကာအိမ်ကို နှစ်သိန်း၊ တိုက်အိမ်တွေကို နှစ်သိန်းခွဲ စသဖြင့် ဌာနရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်း ထောက်ပံ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ နေအိမ်တွေ မီးလောင်ဆုံးရှုံးတာတွေ အတွက် အခြားတင်ပြလာတာတွေရှိရင်လည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ ဆက်လက်ထောက်ပံ့နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်မယ် လို့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က တင်းမကျေးရွာမှာ ရှိတဲ့နေအိမ်တွေကို တပ်မတော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဝင်ရောက် မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံ ကျေးရွာသားတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက သတင်းမီဒီယာတွေကို ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောက်တော်မြို့နယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးထွန်းဝင်း ကတော့ မီးရှို့ခံရတဲ့ အခြားကျေးရွာတွေလည်း ရှိနေပြီး အချက်အလက်တွေ ကောက်ယူနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။
အခုလို တပ်မတော်က ငြင်းချက်ထုတ်ထားတဲ့ မီးလောင်နေအိမ်တွေကို ပြည်နယ်အစိုးရက ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့ ကိစ္စ၊ ဒေသခံတွေက တပ်မတော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက မီးရှို့တာ၊ လေကြောင်းက ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် မီးလောင်တာဖြစ် ကြောင်း ပြောဆိုစွပ်စွဲကြတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်ဘက် တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်ရဖို့ RFA က တပ်မတော်သတင်း မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကို အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်အထိ ဆက်သွယ်လို့ မရသေးပါဘူး။ ကျောက်တော်နဲ့ ပလက်ဝမြို့နယ်အစပ်နားမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းကနေ စတင်ခဲ့တဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)နဲ့ တပ်မတော်တို့ရဲ့ ရက်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြာတိုက်ပွဲမှာ အရပ်သား အများအပြားသေဆုံးခဲ့ပြီး နေအိမ်အများအပြားလည်း မီးရှို့ ခံခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီဒေသက ဒေသခံ ၈၀ဝဝ ကျော်ဟာလည်း ကျောက်တော်မြို့ပေါ်မှာ ဒီနေ့အထိ ထွက်ပြေးခိုလှုံနေကြရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/govt-compensates-kyauktaw-houses-04242020073421.html
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ၁ လအကြာ ရပ်နားထားတဲ့ ခရီးသွားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို ပြန်လည်စတင်နေပြီလို့ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Covid 19 ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွား မတ်လအတွင်းမှာ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေက ဦးဆောင်ပြီး မြို့ဝင်ဂိတ်တွေမှာ ခရီးသွားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲလို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေဟာ မတ်လကုန်မှာ ရပ်နားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါ မွန်ပြည်နယ်ဟာ Covid 19 ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေကို ဆက်လုပ်ထိန်းသိမ်းဖို့ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတာတွေကို ပြည်နယ်ဝင်ပေါက် တွေ မှာ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးမြင့်သန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
ခရီးသွား ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုတွေကို ဧပြီ ၂၆ ရက်ကစပြီး ကျိုက်ထိုမြို့နယ် အဝင်ပေါက်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ပဲခူးတိုင်းအပြင် တခြားတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်က ပြန်လာတဲ့သူတွေကို စတင် စစ်ဆေးနေတာပါ။ ဒါအပြင် ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံနဲ့ ဘုရားသုံးဆူ ဝင်ပေါက်တွေကနေ မွန်ပြည်နယ် လာမယ့်သူတွေကို မော်လမြိုင် စက်မှုဇုန်နဲ့ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွေမှာ ဗမာတိုင်းရင်းသား ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး နှစ်ဦးက ဦးဆောင်ပြီး ဌာနပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်းအဖွဲ့က လာမယ့်အပတ် အတွင်း စတင်စစ်ဆေးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလို စစ်ဆေးရာမှာ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့သူတွေကို Quarantine ၂၁ ရက် ထားရှိသွားမယ်လို့ ဦးမြင့်သန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
အခုလို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတာတွေကို ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး မွန်ပြည်နယ် အတွင်း ဝင်လာတဲ့သူမှန်သမျှကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးတာနဲ့ အချက်အလက် ကောက်ယူတာတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ဒေါက်တာခင်ဆောင်က ပြောပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် Covid-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူလူနာအမှတ် ၂၇ တဦးသာရှိနေပြီး အခုအခါရောဂါပိုးမရှိတော့ဘဲကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/384784
လူဦးရေထူထပ်သော ဖားကန့် ရတနာမြေသို့ ဧပြီ ၂၅ရက်နောက်ပိုင်း ဝင်ရောက်လာသော မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထား သည့်နေရာတွင် ၂၁ ရက် Quarantine ဝင်ရမည်ဟု သိရသည်။ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့တွင်းသို့ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အဝင်အထွက်ကန့်သတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဒေသန္တရလိုအပ်ချက်အရ ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့မှစကာ ဝင်ရောက်လာသည့် မည်သူ မဆို သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင် Q ဝင်ရန် ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့ကြခြင်းကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင့်စိုး ပြောသည်။
“Q မလုပ်ဘူးဆိုရင် တံခါးမရှိ ဓါးမရှိဝင်ထွက်ခွင့်ပေးထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကျတော့ ကျနော်တို့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ဘယ်ကဘဲ လာလာ ၂၁ ရက် Q ဝင်ရမယ်။ လက်ရှိအနေအထားတော့ လူစီးကားတွေဝင်တာ အင်မတန်နည်းသွားပါပြီ။ အဓိက ဝင်နေတာ က ကုန်စည်စီးဆင်းမူအရ ကုန်ကားတွေ၊ လောင်စာဆီသယ်တဲ့ကားတွေနောက်ပြီးတော့ တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ ကုန်ကား သေးတွေဝင်တာလောက်ဘဲ ရ်ှိပါတော့တယ်။ သီးခြားဝင်တာဆိုရင် ဖားကန့်မှာအိုးနဲ့ အိမ်နဲ့အတည်တကျနေတဲ့သူတွေ ဝင်လာ တာရှိတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် Qဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ တက်လာပေါ့။ မဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရောက်တဲ့နေ ရာဘဲနေပြီး အခြေနေကောင်းမှဘဲပြန်တက်လာ ဒီလိုဘဲရှိတာပေါ့။” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင့်စိုး ဆိုသည်။
ဖားကန့်မြို့တွင်းသို့ဝင်သည့် ဂိတ်ပေါင်း ၄ခု ရှိပြီး လက်ရှိအနေအထားအရ ကုန်ကား၊ လောင်စာဆီကားများသည် တစ်ရက် လျှင် အစီးရေ ၂၀၀ ခန့် ပုံမှန်ဝင်ထွက်မှုရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
“အားလုံးက ဒီ Covid-9 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့တွက် သက်ဆိုင်ရာက တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရ တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက Q ဝင်တဲ့သူတွေကို ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေတဲ့သူရှိသလို အဆင် မပြေတဲ့သူလည်း အများကြီးရှိနိုင်တယ်။ အဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင် Q ဝင်တဲ့သူတွေကို Q ကာလအတွင်း တစ်ကယ်ခက်ခဲတဲ့သူ တွေကို ကူည်ီပေးစေချင်တယ်။” ဟု Green Land အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်းမှ ဒေါ်ခင်စန်းတင့် ယခုလိုပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်း လက်ရှိ Q ဝင်သူစုစုပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ခန့်ရှိသည်။ အစိုးရမှ လူ ၅ ဦးထက် ပိုမစုရဟု အမိန့်ထုတ်ထားသော်လည်း ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းမှော်တွင် ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေနေသူများမှာ ပုံမှန်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/27/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေဖို့ လွိုင်ကော်မြို့မှာ ၅ ရက်တဈေး ရောင်းချနေတဲ့ နောင်ယားဈေးကို ဧပြီ ၂၆ ရက် နေ့ကစပြီး ပုံစံပြောင်းရောင်းချစေပါတယ်။ လူစုလူဝေးနဲ့ ကြပ်သိပ်မှု မရှိစေဖို့ ဈေးရောင်းသူတွေအတွက် ၈ ပေပတ်လည် အကွက်ရိုက်ထားပေးပြီး ရောင်းချခိုင်းထားတယ်လို့ လွိုင်ကော်မြို့ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အမှုဆောင်အရာရှိ ဦးသန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့က အကွက်သစ်ရိုက်ပေးလိုက်တာ အကွက်တွေကို၊ ကျနော် ၈ ပေ ပတ်လည် အကွက်လေးတွေ ပေးထားတာ။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကျတော့လည်း နည်းနည်းလေးပဲ လာရောင်းသူတွေကျတော့ ၈ ပေအကွက်မှာ ၄ ပေ ခြား နှစ်ယောက် ယူတာပေါ့။ အဓိကကတော့ ကျနော်တို့က လူစုစုနဲ့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ လူတယောက်နဲ့တယောက် တိုးကြိတ်ပြီးမှ မဖြစ်အောင်လို့ ကျနော်တို့က ဒီလို ချဲပေး လိုက်တာပေါ့။ စနစ်တကျလည်း ဖြစ်သွားအောင်၊ ရောင်းဝယ်သူ တွေလည်း အဆင်ပြေအောင် လမ်းသွားလမ်းလာ တွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် အဲဒီရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ လုပ်တာပါ။”စည်ပင်သာယာရေးကော်မီတီအနေနဲ့ ဈေးသည် တွေအတွက် ဈေးတွင်းဈေးပြင် အကွက် ၃၀ဝ ခန့် ရိုက်ထားပေမယ့် ဈေးသည်တွေက ဒီထက်မက ပိုများနေတဲ့အတွက် ရိုက်ထားတဲ့အကွက်နဲ့ မလုံလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် တချို့မှာတကွက် ၂ ယောက် ရောင်းချရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတလို့လည်း ပြောပါတယ်၊
ပုံစံပြောင်းရောင်းချတဲ့ ဈေးသည်တွေအတွက် ထီးကိုတော့ MyTel က ထီး ၁၂၀ လာလှူထားပေးကြောင်းလည်း ဆိုပါတယ်။ နောင်ယားဈေးဟာ ၅ ရက်တဈေး ရောင်းချတဲ့ဈေးဖြစ်ပြီး ကယားပြည်နယ်နေရာအနှံ့က ဒေသခံတွေ သူတို့ဒေသထွက် ပစ္စည်းတွေ လာရောက်ရောင်းချတဲ့ ဈေးတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ mask တပ်ဆင်ဖို့ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့က နှိုးဆော်ထားပြီး မတပ်ရင်တော့ ဒဏ်ငွေ ၃၀ဝ၀ ပေးဆောင်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ http://burm ese.dvb.no/archives/384611
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် မူဆယ်မြို့ ဟိုဆောင်ရပ်ကွက်နှင့် တော်ရွတ်ရပ်ကွက်ကြား မင်္ဂါလာအောက်လမ်းသွား ရွှေလီမြစ်အနီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုလေးတွင် ဧပြီလ ၂၇ ရက် နံနက် ၆ နာရီ ဝန်းကျင်က တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး လဲကျ သေဆုံးကြောင်း သိရသည်။“ကျွန်တော့်ကို မနက်က ဆယ်အိမ်မှူးနဲ့ မီးသတ်တွေက ဖုန်းဆက်လာတယ်၊ နှလုံးလှကူညီမှု အသင်းကား လာခေါ်တယ်။ သေဆုံးသူက တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလူ၊ ရေထဲက ကူးလာတာလား ဘယ်လိုသေလဲမသိဘူး၊ သူပုံစံ ကြည့်ရတာ ဘောင်းဘီနဲ့ဖိနပ်မှာ ရေတွေစိုနေတယ်၊ မိုးရွာလို့ဘဲ စိုတာလား မသိရပေမယ့် သဲတော့ နည်းနည်းပေနေတယ်၊ ဟိုဘက်ကမ်းကကူးလာတာလားတော့ သေသေချာချာတော့ မသိဘူး”ဟု တော်ရွက်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိုင်းကျော်မြင့် က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တရုတ်နိုင်ငံသားသည် ရွှေလီမြို့ နေထိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရွှေလီမြစ်ကိုဖြတ်သန်း၍ ဝင်ရောက်လာစဉ် လမ်းပေါ် ၌ လဲကျသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီး သေဆုံးသူ တရုတ်နိုင်ငံသားအား နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ရင်ခွဲစစ်ဆေး မှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် မူဆယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ နှလုံးလှ လူမှုကူညီရေး အသင်းကားဖြင့် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ သေမှုသေခင်း ဖွင့်ထားပါတယ်၊ သူကကျန်းအာရေး မကောင်းဘူး၊ နှလုံးရောဂါရှိတယ်လို့ ရွှေလီမြို့က သူ့ မိသားစုထံက စုံစမ်းသိရပါတယ်၊ နှလုံးရောဂါရှိလို့ ဒီဘက်ကမ်းကိုကူးရင်း နှလုံးဖေါက်ပြီး လဲကျသေဆုံးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်၊ တရုတ်ရဲဘက်က ပြောတာတော့ သူတို့ဘက်မှာ ဆေးစစ်ထားတာတော့ COVID-19 ရောဂါ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်” ဟု မူဆယ်မြို့မရဲစခန်း စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး သန့်ဇော်ဦးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ သေဆုံးသူ၏ ရုပ်အလောင်းအား မူဆယ်ပြည်သူ့ ဆေးရုံက ရင်ခွဲစစ်ဆေးနေလျက်ရှိကြောင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရသိရသည်။ https://news-eleven. com/article/170920
ဘားအံမြို့ပေါ်တွင် ဧပြီ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်က မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်တချို့ ခေါင်မိုးလန် ပျက်စီး မှုရှိခဲ့ပြီး ဓာတ်တိုင်များလဲပြိုကာ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ “မိုးလေပြင်းထန်မှုက နာရီဝက် လောက်ပဲကြာပါတယ်။ အထကကျောင်းအရှေ့မှာ ဓာတ်တိုင်နှစ်တိုင်လဲပြိုပြီး လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ် ပေါ်ခဲ့လို့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် တွေ ရှင်းလင်းမှု ပြုလုပ်နေပါတယ်။ လှာကမြင်ကွက်သစ်နဲ့ ဈေးမသွယ်ကွက်သစ်ဘက်မှာ လူနေအိမ် ငါးလုံးလောက်ခေါင်မိုး လန် ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီး လူထိခိုက်မူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး” ဟု ဘားအံမြို့ခံ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဘားအံမြို့တွင် မိုးသက်လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုမှာ နာရီဝက်ခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဘားအံမြို့ တန်းမြင့် ကျောင်းလမ်း၊ အထကကျောင်းအရှေ့ရှိ ဓာတ်တိုင်နှစ်တိုင် လဲပြိုခဲ့ပြီး လမ်းပိတ်ဆို့ မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကာ 66 KV ဓာတ်အား လိုင်းပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/170671၂၆။ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ နယ်စပ် ပိတ်ထားမှုကြောင့် မူဆယ်မြို့ နယ် မန့်ဟီးရိုးမြို့တွင် ပြောင်းဖူးတင်ထော်လာဂျီ အစီး ၄၀ဝ ခန့်ပိတ်မိနေ
April 27, 2020တရုတ်နိုင်ငံက COVID- 19 ရောဂါ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ နယ်စပ်တစ်လျှောက် ပိတ်ထားမှုကြောင့် မြန်မာ တရုတ် နယ်စပ် မူဆယ်မြို့နယ် မန့်ဟီးရိုးမြို့အတွင်းရှိ နောင်ဖိုင်နှင့် ခါးလှိုင်ရွာအတွင်း ဧပြီ ၂၇ ရက် မှစတင်ကာ ပြောင်းဖူးတင် ထော်လာဂျီ အစီးလေးရာခန့် ပိတ်မိနေပြီး ဈေးနှိမ်ဝယ်ယူမှု့များရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပြောင်းဖူးများမှာ မူဆယ်နမ့်ခမ်းဒေသထွက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် မြန်မာ တရုတ် နယ်စပ်ရှိ ရွာချင်းစပ်နေသည့် နေရာများ ကိုပါ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ အဝင်အထွက်အား တင်းကြပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် အရောင်းအဝယ်များ ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲမှုများ ဖြစ်ပေါ် နေခြင်း ဖြစ်သည်။“မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့အထိ အစီးပေါင်းလေးရာလောက်တော့ ပိတ်မိနေတယ်။ အခုထိ သွားလို့မရသေးဘူး ခင်ဗျား၊ တရုတ်ပြည်ရွှေလီ အာဏာပိုင်တွေက တရုတ်နယ်စပ်အကုန်လုံးကို ပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ နယ်စပ်တလျှောက် မှာ နေတဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေအကုန်လုံး တရုတ်ပြည်ကိုဘဲ ရောင်းဖို့ဘဲ ရှိတယ်လေ၊ အဲ့လိုအခါမျိုးမှာကျတော့ အကုန်လုံး က ပိတ်မိနေပြီး ဝင်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်” ဟု ပြောင်းဖူးစိုက်တောင်သူ စိုင်းမောဝ်အွန်က ပြောကြားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက နယ်စပ်တလျှောက် တင်းကြပ်သော အစီအမံများ ချမှတ်ကာ ပိတ်ထားပြီး ကုန်သွယ်မှု မပျက်အောင် ကုန်စည် စီးဆင်းမှုကို ဖွင့်ပေးထားကာ ပြောင်းဖူးရောင်းဝယ်မှုကိုလည်း နားလည်မှုဖြင့် ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း မူဆယ်မြို့အတွင်း COVID- 19 တွေ့ရှိပြီးနောက်ပိုင်း ပြောင်းဖူးရောင်းဝယ်မှုအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ပိုမိုးတင်ကြပ်မှုများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ယခုအခါ မန့်ဟီးရိုးမြို့အဝင်ရှိ နောင်ဟင်၊ နောင်မွန်၊ နောင်ခေါ်၊ ကောင်းကွက်၊ နောင်ဖိုင် စသည့် အဝင် ပေါက်များကို ဒေသန္တရအမိန့်ဖြင့် သွားလာမှု ကန့်သတ်ထားကာ စက်လှေဆိပ်များလည်း ပိတ်ထားကြောင်း မန့်ဟီးရိုးမြို့နယ် အုပ်အုပ်ရေးမှူးရုံးက သိရှိရသည်။ https://news-eleven.com/article/170957
၂၇။ ထိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် နေရပ်ပြန်မည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်း ရန် လို အပ်
မေလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ထိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမားများအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံးသို့ ကိုယ်ရေး အချက်အလက် များမပျက်မကွက် ဖြည့်သွင်း ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ (ဧပြီလ ၂၆ ရက် ) နေ့စွဲဖြင့် အလုပ်သမား သံအရာရှိရုံးက ထုတ်ပြန် အသိပေးနှိုးဆော် လိုက်သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဖြစ်မနေ နေရပ်ပြန်ရမည့် အလုပ်သမားများ၏ အင်အားစာရင်းကို သိရှိရန်အပြင် အခက်အခဲ မရှိစေဘဲ နေရပ်ပြန်နိုင်စေရန်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သည့် အစီအမံများ စီစဉ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ယခုလို နှိုးဆော်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမားသံ အ ရာရှိရုံးက ဆိုသည်။
ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း မြဝတီ-မဲဆောက် နယ်စပ်ဂိတ် စတင်ဖွင့်လှစ်ပါက မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမားများအနေ ဖြင့် အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် နေ့စဉ် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပါက နေရပ်ပြန် အင်အားနှင့် စိစစ် လက်ခံနိုင်သည့် အင်အား ကန့်သတ်မှုရှိနိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်း၊ ခရီးသွား လာစရိတ်၊ နေထိုင်စားသောက်စရိတ်နှင့် အခြားမလိုလားအပ်သော အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းကြောင့် သံအရာရှိရုံးမှ ယခုလိုအသိပေးခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်သားများအရေး ပူးတွဲလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ(JACBA) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးကြိုးက “ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမား သံ အရာရှိရုံးက ပေးလိုက်တဲ့ လူဦးရေစာရင်းဇယားအတိုင်းပဲ ကားတွေကို စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ list ထဲမှာ မပါတဲ့သူတွေက တော့ ကားတွေအစစ်အဆေးခံရမှာပဲ။ အဲ့ဒီ list ထဲမှာပါတဲ့ အခါကျတော့ စနစ် ကျတယ်လေ။ လမ်းခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာ
လည်း အရင်ကလို မလိုလားအပ်စွာသော အစစ်အဆေး မေးမြန်းမှုတွေ ဘာတွေ တခါတည်းမရှိတော့ဘူး။” ဟု ကေအိုင်စီ သို့ ပြောသည်။ အလားတူ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီး ပြန်လာရန် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား များကိုလည်း အကူအညီလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်ခေါ်ရန်စီစဉ်နေကြောင်း အဆိုပါသံရုံးများက ထုတ်ပြန် ထားကြောင်းလည်း သိရ သည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1
၁။ လားရှိုးမွို့နယျအတှငျး ကြေးလကျဒသေခံမြား လူ၊ ကား ခြောဆှဲခံနရေ
၂။ ရခိုငျပွညျသူမြား၏ ဒုက်ခကိုစာနာပွီး တိုကျခိုကျမှုမြား အမွနျဆုံး ရပျရနျ ALP တောငျးဆို
၃။ တပျမတျောက NCA ကို ခြိုးဖောကျပွီး ပွညျသူလူထုကို ဆကျလကျတိုကျခိုကျနဆေဲဟု သံလှငျငွိမျးခမျြးရေး ဥယြာဉျ ကျောမတီ ပွော
၄။ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျတှငျး ဥပဒမေဲ့ ကြူးလှနျမှုတှကေို စုံစမျးပေးရေး ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ကခငျြကှနျဂရကျ တောငျးဆို
၅။ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျတှငျ ယခငျနှဈမြားထကျ သောကျသုံးရရှေားပါးမှု ပိုမိုကွုံတှနေ့ရေ
၆။ မိလ်လာကငျြးတူးရာမှ မိသားစုလိုကျ သဆေုံး
၇။ မူဆယျမွို့ ပနျးဆေး ပွညျသူ့စဈပိုငျ အဆောကျအဦး တိုကျခိုကျခံရ
၈။ ကခငျြလူထုမူးယဈတိုကျဖကျြရေးနကေို့ အိမျတှငျးဆုတောငျးခွငျးအစီစဉျဖွငျ့သာ ပွုလုပျခဲ့ရ
၉။ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျက ရှာ၂၀ နီးပါး ထှကျပွေးနရေ
၁၀။ Covid-19 အရေး ပူးပေါငျးရနျ မှနျပွညျနယျအစိုးရက မှနျပွညျသဈပါတီကို တိုကျတှနျး
၁၁။ ဖားကနျ့က ရမေဆေးကြောကျ ရှာသူတှကွေား COVID-19 စိုးရိမျ
၁၂။ အတိုငျပငျခံ၏ ထုတျပွနျခကျြ တပျဘကျကို ထောကျပွမထား၍ ခငျြးအဖှဲ့အစညျးအခြို့ဝဖေနျ
၁၃။ အငျးလေးကနျ ရခေမျး စိုကျပြိုးရေး ခကျခဲ နေ
၁၄။ မလေတှငျ တောငျယာခုတျမှုမပွုလုပျနိုငျပါက ကပျတဲလျရှာ၌ တဈနှဈစာ ရိက်ခာ အခကျအခဲဖွဈနိုငျ
၁၅။ ကအေိုငျအို ထိနျးခြုပျနယျမွရှေိ Quarantine စငျတာက လူအခြို့ အိမျပွနျခှငျ့ရရှိ
၁၆။ လှတျတျောအစညျးအဝေးမြား မေ ၁၈ ပွနျစမညျ
၁၇။ ပလကျဝမွို့ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ ရိက်ခာ တပျမတျော အကူအညီဖွငျ့ ပို့မညျ
၁၈။ တောငျကွီး Covid-19 လူနာ ဆေးရုံက ဆငျးခှငျ့ရ
၁၉။ ကူညီထောကျပံ့မှု ယာယီရပျဆိုငျးခွငျးနှငျ့ အပွငျထှကျခှငျ့တားမွဈခံရခွငျးကွောငျ့ လီဒိုလမျး စဈရှောငျမြားအခကျတှေ့
၂၀။ တပျမတျောငွငျးဆိုထားတဲ့ ကြောကျတျော မီးလောငျနအေိမျတှအေတှကျ ပွညျနယျအစိုးရ ငှထေောကျပံ့
၂၁။ ၁ လကွာ ရပျထားသညျ့ မှနျပွညျနယျ ခရီးသှားကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုမြား ပွနျလညျစတငျ
၂၂။ ဖားကနျ့မွို့သို့ ဝငျလာသူမြား ကိုယျ့စားရိတျဖွငျ့ ၂၁ ရကျ Quarantine နရေမညျ
၂၃။ လှိုငျကျောမွို့က ၅ ရကျတဈေး နောငျယားဈေးကို ပုံစံပွောငျးရောငျးခခြိုငျး
၂၄။ မူဆယျမွို့ရှိ ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးခှငျတဈခုဘေးတှငျ တရုတျနိုငျငံသားတဈဦး လဲကသြဆေုံး
၂၅။ ဘားအံမွို့တှငျ မိုးသကျလပွေငျး တိုကျခတျမှုကွောငျ့ နအေိမျတခြို့ ခေါငျမိုးလနျပကျြစီးပွီး ဓာတျတိုငျမြားပွိုလဲကာ လြှပျစဈမီး ပွတျတောကျ
၂၆။ တရုတျနိုငျငံဘကျမှ နယျစပျ ပိတျထားမှုကွောငျ့ မူဆယျမွို့နယျ မနျ့ဟီးရိုးမွို့တှငျ ပွောငျးဖူးတငျထျောလာဂြီ အစီး ၄၀ဝ ခနျ့ ပိတျမိနေ
၂၇။ ထိုငျးနယျစပျဂိတျမှတဈဆငျ့ နရေပျပွနျမညျ့ မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြား ကိုယျရေးအခကျြအလကျမြား ဖွညျ့ သှငျးရနျလိုအပျ
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့နယျ မိုငျးကကျြအုပျစုဘကျလှုပျရှားသညျ့အစိုးရတပျမတျောသညျ ဒသေခံရှာသားမြားထံမှ ဝါး၊ သဈမြားဆငျ့ဆိုခွငျး ကား၊ထျောလာဂြီမြားအား ခြောဆှဲခွငျးမြားပွုလုပျနကွေောငျး ဒသေခံမြားပွောပွခကျြအရသိရပါသညျ။ လားရှိုးမွို့အရှဘေ့ကျရှိ မိုငျးကကျြအုပျစုတှငျ အခွခေသြညျ့ အစိုးရတပျမတျော တပျမ ၉၉ လကျအောကျခံ ခမရ ၃၆၅ သညျ မိုငျးကကျြဒသေခံမြားထံမှ ကား၊ ထျောလာဂြီမြား တရကျလငျြ ၄ စီးဆငျ့ဆိုခြောဆှဲနကွေောငျး၊ မိုငျးယျောနှငျ့ မိုငျးကကျြကွား ဝမျ့ခနျ ၊ ပနျလြှျော ရှာဘကျရှိ ၎င်းငျးတို့တပျစခနျးသို့ ပစ်စညျးမြား တငျပို့ပေးခိုငျးကွောငျး မိုငျးကကျြဒသေခံ ဆနျစိုငျးဆာမျ ကပွော သညျ။ “သူတို့ သုံးဖို့ ကား ၊ထျောလာဂြီတှကေို ဝမျ့လုံမိုငျးကကျြကို နတေို့ငျး စတနျးပိုငျသှားနပေေးရတယျ။ ကားသမား တယောကျကို ပနျလြှျောက သူတို့စခနျးဆီပစ်စညျးပို့ခိုငျးတာ ၂၁ ရကျကတညျးက သှားတယျ ၂၃ ရကျနမှေ့ပွနျလှတျပေးတယျ ” – ဟု ဆနျစိုငျးဆာမျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောသညျ။
ပနျလြှျောရှိ အဆိုပါတပျစခနျးသညျ ယခငျက ကောငျးခါး ကတေီအေ ပွညျသူ့စဈစခနျးခြ နထေိုငျကွောငျး၊ အစိုးရတပျမတျောမှ ၎င်းငျးတို့ဌာနခြုပျဖွဈသော ကှတျခိုငျမွို့ရှိ ကောငျးခါးရှာအား ဝငျရောကျစဈဆေးကာ မူးယဈခကျြရုံမြားအားသိမျး ဆညျးလိုကျပွီး နောကျ ဖဖေျောဝါရီလနှောငျးပိုငျးကစပွီး ပနျလြှျောစခနျးအားလညျး အစိုးရတပျက ဝငျရောကျတပျစခနျးခနြထေိုငျခဲ့ကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ စခနျးပွုပွငျဆောကျရနျအတှကျ လိုအပျသော သဈ၊ ဝါးမြား ပစ်စညျးမြားကို ဒသေခံမြားထံမှ ဆငျ့ဆိုယူဆောငျ နကွေောငျး မိုငျးယျောဒသေခံ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့ဝငျတဦးကပွောသညျ။
ထိုသို့ လူထုမှ အဓမ်မလုပျအားပေးနရေမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး သြှမျးလူ့အခှငျ့အရေးမဏ်ဍိုငျ SHRF မှ စိုငျးဟျောရှဲနျက – “လူထု အနနေဲ့တော့ ဒီလိုခံနရေတာ နှဈရှညျလမြားဖွဈနပွေီ။ အစိုးရရဲ့တပျမတျောဘကျက ဖွူစငျတဲ့စတေနာသဘောထားရှိရငျ စားပှဲဝိုငျးမှာ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးအဖွရှောနိုငျမှ ဒီအခုလို လူထု အဓမ်မအခှငျ့အရေးကြူးလှနျခံနရေတာတှကေိုဖွရှေငျးနိုငျမယျ။ နိုငျငံတကာဥပဒနေဲ့ဆိုရငျ အခုလိုမြိုး တပျမတျောက လူထုကိုလုပျအားခိုငျးစနေတောတှဟော စဈဥပဒကေို ဖောကျဖကျြကြူး လှနျတာဘဲ ”- ဟု သြှမျးသံတျောဆငျ့အားပွောသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16298
ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ (COVID-19) ကပျရောဂါ အန်တရာယျကို တတိုငျးပွညျလုံး ညီညာစှာ ရငျကွရမညျဖွဈ၍ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ နှဈဖကျ တိုကျခိုကျမှုမြားကို အမွနျဆုံးရပျဆိုငျးပေးရနျ ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေး ပါတီ (ALP) က ဧပွီလ ၂၃ ရကျ တှငျ ထပျမံ တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ ALP သညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ဧပွီလ ၁၂ ရကျကလညျး ယငျးသို့ တောငျးဆိုထားသေးသညျ။ ဧပွီလ ၂၀ ရကျ တှငျ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ (WHO) ၏ ကားတစီး ပဈခတျခံရ၍ WHO ဝနျထမျးတဦး သဆေုံးပွီးနောကျ အရပျသား ပဈခတျခံ ရမှုမြား ပိုမိုမြားလာပွီးနောကျတှငျ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ထုတျပွနျခကျြထုတျကာ တောငျးဆိုလိုကျ ခွငျးလညျးဖွဈသညျ။
ALP အဖှဲ့မှ ဗိုလျမှူးကွီး ခိုငျစိုးမွ က “ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈလညျး ဖွဈနတေော့ လူတှကေ အထိတျတလနျ့လညျး ဖွဈနရေတယျ။ နောကျပွီး စဈရေးနဲ့ပတျသကျလို့ အထိတျတလနျ့ ဖွဈနတေော့ လူတှကေ နစေရာမရှိသလို ဖွဈနတေယျ။ ဒီဥစ်စာကို နှဈဖကျ စလုံး (AA နှငျ့ တပျမတျော) က ကိုယျခငျြးစာနာသငျ့တယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောကွားသညျ။
ALP ၏ထုတျပွနျခကျြနှငျ့ ပတျသကျ၍ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP)မှ မူဝါဒရေးရာ ဦးဆောငျကျောမတီဝငျ ဦးထှနျးအောငျကြျော က ALP ၏ တောငျးဆိုခကျြမြားသညျ လကျရှိ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ လိုအပျခကျြဖွဈနသေညျ့ ကိစ်စမြားကို တောငျးဆိုထားခွငျး ဖွဈကွောငျး မှတျခကျြပေးသညျ။ ဦးထှနျးအောငျကြျော က “ရခိုငျပွညျနယျမှာ လူထု ထိခိုကျနဈနာမှုတှကေ အရမျးမြားလာပွီ။ ဒီပွဿနာက နှဈဖကျတိုကျခိုကျတာ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ အထိခိုကျဆုံးက အရပျသားတှပေဲ အကွီးအကယျြ ခံနရေတာ။ ဒီအခကျြတှကွေောငျ့ စဈရပျစဲဖို့ တောငျးဆိုတာက သဘာဝကတြယျ။ လိုလညျး လိုအပျတယျ” ဟု ဆိုသညျ။
ANP နှငျ့ ALP တို့က စဈပှဲရပျဆိုငျးရနျ တောငျးဆိုမှုမြားရှိနသေျောလညျး ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ မွနျမာအငျစတီကြူ (MIPS) ၏ အမှုဆောငျ ဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာ မငျးဇျောဦးကမူ လကျတှေ့ မွပွေငျအခွအေနတှေငျ နှဈဖကျစလုံးက အပဈရပျ မညျ့ အနအေထားရှိပုံ မရကွောငျး ပွောကွားသညျ။ AA အဖှဲ့၏ တပျဖှဲ့ဝငျမြားကို ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈတှငျ မွောကျဦးမွို့၌ ဌာနခြုပျ ဖှငျ့နိုငျရနျ ကွိုးပမျးမညျဟု ပွောဆိုထားသညျဖွဈရာ အဆိုပါ ပွောဆိုခကျြအတိုငျးဖွဈရနျ ကွိုးပမျးလာမညျ့ အခွအေနရှေိပွီး တပျမတျောကလညျး ယငျးကွိုးပမျးမှုကို တားဆီးမညျ့အနအေထားရှိနကွေောငျး ၎င်းငျးက သုံးသပျသညျ။ https://burma.irra waddy.com/news/2020/04/25/221317.html
မွနျမာ့တပျမတျောမှ တဈနိုငျငံလုံးအပဈအခတျရပျစဲရေးသဘောတူစာခြုပျ-NCAကို ခြိုးဖောကျပွီး ပွညျသူလူထု မြားကို တိုကျခိုကျမှုမြား ဆကျလကျလုပျဆောငျနဆေဲဖွဈကွောငျး သံလှငျငွိမျးခမျြးရေး ဥယြာဉျကျောမတီက ထုတျပွနျပွောဆို လိုကျသညျ။ ကအေဲနျယူ-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး မူတရျော(ဖာပှနျ)ခရိုငျ (တပျမဟာ ၅) ၊ လူသောမွို့နယျထဲတှငျ ယခငျလ မတျလ ၃၁ ရကျနကေ့ ပဈသတျခံခဲ့ရသော စောသကျမီး၏ အောကျမဖှေ့ယျအတှကျ ယမနျနေ့ ဧပွီလ ၂၃ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျသညျ့စာ၌ ထိုသို့ ဖျောပွထားခွငျးဖွဈသညျ။
တပျမတျောအနဖွေငျ့ အပဈခတျရပျစဲရေး စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားကို မခြိုးဖောကျဘဲ ဒသေတှငျးတငျး မာမှုမြားကို အကွမျး မဖကျသောနညျးလမျးနှငျ့ မှနျကနျသောစိတျထားဖွငျ့ ဖွရှေငျးခဲ့လြှငျ ပွညျသူနောကျ ထပျတဈဦး ထပျမံဆုံးရှုံးရမညျ့ အဖွဈကို ရှောငျလှဲနိုငျမညျဖွဈကွောငျး ဆိုသညျ။ သံလှငျငွိမျးခမျြးရေး ဥယြာဉျကျောမတီ၏ ပွောခှငျ့ရ နျောဆာမူးက “နှရောသီလို ပှငျ့လငျး ရာသီရောကျပွီးဆိုရငျ စဈတပျက မူတရျော ဒသေမှာ သူတို့ရဲ့ တပျလှုပျရှားမှုတှေ ပိုလုပျလာလရှေိ့တယျ။ အထူး သဖွငျ့ လမျးဖောကျ လုပျတဲ့ကိစ်စလိုပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ကမြတို့ပွောသလိုပဲ သူတို့ လကျမှတျထိုးထားတဲ့ NCA အပဈရပျ စာခြုပျကို သူတို့ မလေးစားဘူး။ ဆိုလိုတာက အဲ့ဒသေက ဒသေခံလူထုတှရေဲ့ တနျဘိုးကို အလေးမထားတာပါပဲ။” ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ကအေဲနျယူနှငျ့ မွနျမာအစိုးရတို့ သဘောတူ လကျမှတျရေးထိုးထားသော NCA စာခြုပျပါ အခနျး(၃) အပိုဒျ ၉၏ အရပျသားမြား ကို ကာကှယျပေးခွငျး အပိုဒျခှဲ (ခ) အရ ပွညျသူလူထုအား လူတဈဦးတဈယောကျ၏ ဂုဏျ သိက်ခာကို ထိပါးစသေညျ့ လုပျရပျ၊ အကွမျး ဖကျခွငျး၊ ဥပဒမေဲ့ ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျခွငျး၊ ပွနျပေးဆှဲခွငျး၊ ညှဉျးပနျး နှိပျစကျခွငျး၊ လူသားမဆနျစှာပွုမှုခွငျး၊ အကဉျြးခြ ခွငျး၊သတျဖွတျခွငျးနှငျ့ ဖြောကျဖကျြခွငျးမပွုလုပျရ ဟူ၍ပါရှိ သညျ။ ထို့အပွငျ အပိုဒျ (၉)၏ အပိုဒျခှဲ (ထ)အရလညျး အရပျသား ပွညျသူမြား စိုးရိမျကွောငျ့ကွမှုမရှိပဲ အပဈရပျ နယျ မွမြေားအတှငျး လှတျလပျစှာ သှားလာခှငျ့ပွုရနျလညျး ဖျောပွပါရှိသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80
မွနျမာတပျမတျော အပွငျးအထနျ ထိုးစဈဆငျ တိုကျခိုကျနတေဲ့ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျတှမှော အပွဈမဲ့ အရပျသားတှအေပျေါ ဥပဒမေဲ့ ရကျရကျစကျစကျ သတျဖွတျမှုတှကေို နိုငျငံတကာအနနေဲ့ စုံစမျးစဈဆေးဖို့ လုံခွုံရေးကောငျစီအနနေဲ့ အစညျးအဝေး ဆငျ့ချေါဖို့ World Kachin Congress ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ကခငျြကှနျဂရကျက တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ ဧပွီလ ၂၅ ရကျနေ့ ထုတျပွနျတဲ့ အဖှဲ့ရဲ့ကွညောခကျြမှာ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ COVID-19 ရငျဆိုငျနရေတဲ့အခြိနျမှာ ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေး မလုပျနိုငျဘဲ စဈပှဲတှေ ဦးစားပေးတိုကျခိုကျနပွေီး အပွဈမဲ့ပွညျသူတှေ သဆေုံးနရေတဲ့ ဖွဈရပျကို စိုးရိမျမကငျးဖွဈမိကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအခွအေနတှေကေို ဟနျ့တားနိုငျရေး လုံခွုံရေးကောငျစီအနနေဲ့ ဝငျရောကျကူညီဖို့ WKC ဥက်ကဋ်ဌ Gum San NSang က ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“မွနျမာနိုငျငံနဲ့ပတျသကျရငျ ထိထိရောကျရောကျ ကိုငျတှယျနိုငျတာက ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီတခုပဲ ကနြျောတို့ မွငျနေ ရပါတယျ။ လူတှေ အမြားကွီး သကေပြေကျြစီးရတယျ။ ဒီလောကျကွီး အပွဈမဲ့ပွညျသူတှေ ဆုံးရှုံးရတာကို ကွညျ့မနဘေဲနဲ့ တခုခုအဖွရှောဖို့ အခြိနျရောကျနပေါပွီ။” ဒါ့အပွငျ ကုလသမဂ်ဂပိုငျ မျောတျောကားတစီး အပါအဝငျ အပွဈမဲ့ ပွညျသူလူထု တှကေို ပဈမှတျထားပွီး လကျနကျကွီးတှေ ဗုံးကွဲ ပဈခတျတိုကျခိုကျတာတှကေိုလညျး ပွငျးပွငျးထနျထနျ ကနျကှကျရှုတျခြ ကွောငျး WKC ထုတျပွနျခကျြမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ စဈဘေးကွောငျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေတဲ့ ရခိုငျ၊ ခငျြးပွညျနယျက ရှာသူရှာသားတှရေဲ့ အခွအေနကေို အလှနျစိုးရိမျမကငျး ဖွဈမိကွောငျးလညျး ဥက်ကဋ်ဌ Gum San NSang က ပွောပါတယျ။
အရငျ နှဈပေါငျး ၆၀ ကြျောကတညျးက ကခငျြ၊ ကရငျ၊ ရှမျးပွညျနယျတှကေ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှကေို ခမြှေုနျး တိုကျခိုကျခဲ့တဲ့ နညျးလမျးအတိုငျး အခု ရခိုငျပွညျနယျမှာ မွနျမာစဈတပျက တိုကျခိုကျနတော ဖွဈတယျလို့လညျး Gum San NSang က ဆိုပါတယျ။ AA ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ အပါအဝငျ ရှမျးနဲ့ မွောကျပိုငျးလကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှကေ ကိုဗဈရောဂါ ကပျဘေးကာလ တိုကျခိုကျမှုတှေ ရပျဆိုငျးထားဖို့ ဧပွီလ ၁ ရကျနကေ့ အဆိုပွုခဲ့ပမေယျ့ မွနျမာတပျမတျောဘကျက ပယျခခြဲ့ တာကွောငျ့ တိုကျပှဲတှေ ဆကျလကျဖွဈပှားနဆေဲ ရှိပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/world-kachin-congress/5392981.html
ကရငျပွညျနယျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ ကြေးရှာအမြားစုတှငျ မွဈခြောငျးမြားနှငျ့ လကျတူးရတှေငျးမြား ခနျးခွောကျလာ သညျ့အတှကျ ယခုနှဈတှငျ ယခငျနှဈမြားက သောကျသုံးရေ အခကျအခဲပိုမိုကွုံတှလေ့ာရသညျဟု ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။ ဖဖေျောဝါရီနောကျဆုံးပတျမှစ၍ မွဈခြောငျး စိမျ့စမျးရမြေားနှငျ့ လကျယကျတူးတှငျးမြားမှာ ရခေနျးခွောကျလာခဲ့ရာ ခလယျ ကြေးရှာအုပျခြုပျစု၊ တံခှနျတိုငျကြေးရှာအုပျစုနှငျ့ ဝငျးရျောဒသေရှိ ကြေးရှာမြားတှငျ သုံးရရှေားပါးမှုအခကျအခဲနှငျ့ ရငျဆိုငျနရေ ပွီး ရအေလှူရှငျမြား၏ ရပေေးဝမှေုမြားအပျေါတှငျသာ မှီခိုနရေသညျဟု ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။
“ ရှာကတောတောငျတှလေညျးပွုနျးပွီး အစားထိုးအပငျတှကွေောငျ့ စိမျ့စမျးရေ အရငျးမွဈနရောတှေ ရအေကုနျခနျးခွောကျ ကုနျတယျ။ ငယျငယျက ရှာခြောငျးတှကေ ၁၂ လရာသီလုံးလုံး ရရှေိနတေယျ။ ကြှဲ နှားတှေ စိုကျပြိုးရေးအတှကျသုံးရတှေေ အတျောဒုက်ခရောကျတယျ။ ကနြျောတို့အဖှဲ့ ရလေိုကျဝတော ၂ လခှဲလောကျရှိသှားပွီး။ မနကျ ၆ နာရီကနေ ညနေ ၉ နာရီအထိ ရှာပေါငျး ၁ဝ ရှာနီးပါး နစေ့ဉျရပေို့ပေးရတယျ”ဟု ခလယျရှာ သောကျသုံးရပေေးဝရေေးပရဟိတအဖှဲ့ စောဘသျောက ဧပွီလ ၂၄ ရကျတှငျ ကအေိုငျစီ သို့ပွောသညျ။ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ ကြေးရှာအမြားစုမှာ ဇမိမွဈနှငျ့ ဝငျးရျောမွဈကွား တောငျညို
တောငျတနျး၏ အရှဘေ့ကျတှငျ ရှာအခွေ တညျပွီး မိုးရာသီတှငျ မွဈခြောငျးရနှေငျ့ တောငျကရြကွေောငျ့ ကြေးရှာအမြားစု ရမွှေုပျခံရကာ နှရောသီတှငျလညျး နှဈစဉျရရှေားပါးမှု ပွဿနာနှငျ့ ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေသညျဟု ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။
“ ရရှေားတဲ့ရှာတှကေို ဒီနှဈအဝီစီတှငျး ၆ တှငျး စိမျ့စမျးရသှေယျတနျးမှုက ၈ ခု ရကေနျတှအေပါပေါ့နျော လုပျဆောငျထား တယျ။ မွို့နယျရပေေးဝရေေးကျောမတီတှေ ဖှဲ့ထားတယျ။ ရရှေားတဲ့ရှာတှေ အသိပေးဖို့ ရှာတှမှောလညျး ပွောထားတယျ။ ဆောငျရှကျ ပေးသှားမယျ”ဟု ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ ကြေးလကျဒသေ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး စောမွငျ့အောငျလငျးက ယနေ့ (ဧပွီလ ၂၅ ရကျ) ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ ဇမိမွဈ အနောကျဘကျခွမျးရှိ ကြေးရှာမြားတှငျ အနကျတောငျ ၃ဝ ကြျောအထိ လကျယကျတူးတှငျးအမြားစု မှာ ရခေနျးခွောကျကုနျ ပွီးဖွဈ၍ သောကျသုံးရရေရှိရနျ ခြောငျး ကမျးပါးမြားတှငျ ယာယီ လကျယကျတူးတှငျးမြားနှငျ့ အမြား သုံးစှဲနိုငျသညျ့ ယာယီရလှေောငျကနျမြားပွုလုပျထားကွရသညျ ဟု ကြေးရှာအုပျခြုပျရေး တာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%a1% e1%80%84%e1%80
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး သီပေါမွို့နယျ ဆောငျကွဲကြေးရှာတှငျ အမြိုးသား (၄) ဦး မိလ်လာကငျြးတူးရငျး ပွုတျကြ သဆေုံးကွောငျး သိရသညျ။ ဖွဈစဉျမှာ ဧပွီ ၂၃ ရကျနေ့ ည ၆ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ ဦးအိုကျလှ ၏ နအေိမျဝနျးတှငျ မိလ်လာကငျြးအသဈတူးရာမှ မိလ်လာကငျြး အဟောငျးမှ မစငျမြားထှကျပွီး အောကျစီဂငျြပကျြကာ တဈဦးကို တဈဦး ဆငျးကယျကွရာမှ မိလ်လာကငျြးထဲ သဆေုံး ခဲ့ရခွငျး ဖွဈကွောငျး သှားရောကျကူညီသညျ့ သီပေါမွို့ဒသေခံ လူငယျတဈဦး ကရှငျးပွသညျ။ “ဖွဈပကျြသှားတာက နာရီဝကျ လောကျပဲ ကွာသှားတယျ။ ၄ ယောကျစလုံး သဆေုံးသှားကွတယျ”ဟု ၎င်းငျးလူငယျ တဈဦးကပွောသညျ။
မိလ်လာကငျြးထဲ သဆေုံးသှားသူမြားမှာ ဦးစိုငျးလှ အသကျ (၄၈) နှဈ ၊သားဖွဈသူ ဦးစိုငျးသီဟ အသကျ( ၂၅) နှဈ ၊ သားဖွဈသူ စိုငျးဇျောဦးသာ အသကျ( ၂၁ ) နှဈ နှငျ့ ဦးစိုငျးလှ နှငျ့ ဆှေးမြိုးတျောစပျသူ မောငျမိုးအောငျ အသကျ( ၂၇ ) နှဈ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ သီပေါမွို့နယျ SNLD ပါတီဝငျ စိုငျးလောဝျဆိုငျက ” ဒီလို မိလ်လာကငျြးတူးမယျဆိုရငျ ကနြျောတို့အားလုံး သတိထားဖို့ လိုတယျ။ တူးမယျဆိုရငျလညျး ကငျြး ဟောငျး နဲ့ ဝေးတဲ့နရောမှာ တူးရမယျ။ မဟုတျရငျ အသကျအန်တရာယျ ထိ ရှိနိုငျတာပေါ့ နျော။ ခုဖွဈသှားတာ ကနြျောတို့အားလုံးအတှကျ သငျခနျးစာ ယူသငျ့တယျ။” ဟု ပွောသညျ။
အခငျးဖွဈပှားရာနရောသို့ သီပေါမွို့နယျ မီးသတျဦးစီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူမြား နယျစညျးမခွားလူမှုရေးအသငျးအဖှဲ့မှ လူနာ တငျယာဉျ ၁ စီးဖွငျ့ သီပေါမွို့နယျ ပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shanne ws.org/archives/ 16284
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့တှငျ ယမနျနေ့ ည ၇ နာရီခှဲက စှမျစျောရပျကှကျရှိ ပနျးဆေး ပွညျသူ့စဈပိုငျ အဆောကျအဦး တိုကျခိုကျခံရကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ဖွဈစဉျမှာ (ဧပွီ ၂၃) ည ၇ နာရီခှဲ ဝနျးကငျြက စှမျစျောရပျကှကျရှိ ပနျးဆေး ပွညျသူ့စဈပိုငျ အဆောကျအဦးထဲသို့ အမညျမသိ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ဝငျရောကျလာကာ ပဈခတျသှားကွောငျး၊ ပွညျသူ့စဈ အဆောကျအဦး ဝငျးထဲသို့ ဗုံးသီးဟုယူဆရသညျ့ လကျနကျ ၅ လုံး ကကြွောငျး မူဆယျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသူရိနျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ “လူထိခိုကျမှုကတော့မရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပနျးဆေးပွညျသူ့စဈဝငျးထဲမှာ ၅ လုံးကသြှားတယျ။ ဗုံးလို့ယူဆရတယျ။ အခု သကျဆိုငျတဲ့ တပျနဲ့ ရဲကတော့ သှားရှငျးနပေါပွီ”ဟု ဦးသူရိနျက ပွောသညျ။ လကျရှိ အခြိနျထိ မညျသညျ့အဖှဲ့က လာရောကျ ပဈသညျကို သကျဆိုငျရာမှ စုံစမျးနဆေဲ ဖွဈကွောငျးလညျး ဦးသူရိနျက ဆိုသညျ။
အဆိုပါလကျနကျကိုငျအဖှဲ့သညျ ပနျးဆေး ပွညျသူ့စဈဝငျးအတှငျး ကားဖွငျ့ ရောကျလာပွီး ပဈခဲ့ကွောငျး ထိုပဈမှုကွာငျ့ တရုတျပွညျတှငျးသို့ ကညျြ တလုံးကခြဲ့ကွောငျး မူဆယျမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ စိုငျးကြျောသိနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ “ အဲ့နရောက ကနြျောတို့ ဝငျဖို့ခကျတဲ့နရောပါ။ လူထိခိုကျမှုတော့မရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဆောကျအဦးထဲမှာ ဘာတှရှေိလဲဆိုတာ ကနြျောတို့ဝငျခှငျ့မရတော့ သခြောမသိဘူး” ဟု စိုငျးကြျောသိနျးက ပနျးဆေး ပွညျသူ့စဈပိုငျ အဆောကျအဦး အခွအေနကေို ပွောပွသညျ။
ယခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလကုနျပိုငျးတှငျ အစိုးရတပျမတျောမှ မူဆယျမွို့နယျ အတှငျး လှုပျရှားနသေညျ့ ပွညျသူ့စဈမြားကို ချေါယူ ကာ တပျမတျောမှ ခမြှတျထားပေးသညျ့ နရောသို့ ပွနျသှားကွရနျ နှငျ့ မွို့မ ပွညျသူ့စဈမှလှဲပွီး ကနျြပွညျသူ့စဈမြား တပျပွညျပ သို့ လကျနကျခဲယမျး ကိုငျဆောငျသှားလာခွငျး မပွုရနျ ပွောကွားခဲ့သညျ။ ထို့ပွငျ မူဆယျမွို့တှငျ ဖှငျ့လှဈထားသညျ့ တရား မဝငျ ဂိမျးဆိုငျမြား၊ လောငျးကစားရုံမြားလညျး ပိတျရနျ ပွောဆိုခဲ့သေးသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives /16277
နှဈစဉျ ဧပွီလ ၂၅ ရကျနသေ့ညျ ကခငျြလူထုမူးယဈတိုကျဖကျြရေးနေ့ (Anti-Drug Day) ဖွဈသျောလညျး ယခုနှဈတှငျ Covid-19 ရောဂါအခွအေနကွေောငျ့ လူထုဆုတောငျးပှဲမပွုလုပျနိုငျဘဲ မိမိအိမျတှငျသာ ဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ ပွုလုပျခဲ့ကွသညျဟု သိရ သညျ။ ကခငျြပွညျနယျတှငျ ဆိုးရှားလာသော မူးယဈဆေးဝါးအန်တရယျကိုတိုကျဖကျြရနျ ကခငျြခရဈယာနျအသငျးတျော အခွပွေု လူထုမူးယဈတိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့ Pat Jasan ကို ၂၀၁၄ တှငျဖှဲ့စညျးခဲ့သညျမှာ ယနေ့ ၆ နှဈပွညျခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ။ ၂၀၁၄ မှစပွီး ဘိနျးခငျးဖကျြဆီးခွငျး၊ ရပျကှကျမွို့ရှာအထိ ဘိနျးသုံးစှဲ ရောငျးဝယျသူမြားကို ပညာပေးခွငျးစသညျ့လုပျငနျးမြား လုပျဆောငျ ခဲ့ပွီး အထိမျးအမှတျနရေ့ောကျတိုငျး လူထုဆုတောငျးပှဲမြားကို ပွုလုပျလရှေိ့သညျ။
“ဒီနှဈက လူစုလူဝေးနှငျ့ကငျြ့ပဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ပမေဲ့ အားလုံးကိုယျရှိတဲ့အရပျကနမှေ မူးယဈဆေးကြေးကြှနျဘဝ မှ လှတျ မွောကျနိုငျဖို့ နှငျ့ အခုဖွဈပှားနတေဲ့ Covid-19 ရောဂါမှ လှတျမွောကျနိုငျဖို့ အထူးဘဲဆုတောငျးကွဖို့ အဓိက ထုတျပွနျထားတာဖွဈတယျ” ဟု တနိုငျးအခွပွေု လူထုမူးယဈတိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့မှ ဆရာနျောတောငျ ပွောသညျ။ စတငျ ဖှဲ့စညျးခြိနျမှစပွီး မူးယဈတိုကျဖကျြရေး စတငျလုပျဆောငျခဲ့ရာတှငျ အောငျမွငျမှုမြားရရှိခဲ့သလို အခကျအခဲမြားလညျး ရှိခဲ့ သညျဟု သိရသညျ။
ကခငျြပွညျနယျတှငျ မူးယဈတိုကျဖကျြရေးကို လူထုအဖှဲ့အစညျးမြားလုပျနသေျောလညျး ပိုမိုထိရောကျရနျ အစိုးရ ကိုယျတိုငျ ပါဝငျ လုပျဆောငျရမညျဟု ဆရာနျောတောငျမှ ပွောသညျ။ မူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေးအစီစဉျကို လာမညျ့နှဈမြားတှငျ ပိုမိုလုပျဆောငျနိုငျရေး ဆုတောငျးပေးဖို့ ယနေ့ ကခငျြလူထုမူးယဈဆေးဝါးတိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့ PJS က ထုတျပွနျထားပါသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/25/%e1%80%80%e1%80%81%e1%80%bb%e1%80%84%e1
တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) တို့ နှဈဖကျတိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျအတှငျးမှ ကြေးရှာပေါငျး ၂၀ နီးပါး အိုးအိမျမြားကို စှနျ့ခှာ၍ ဘေးလှတျရာသို့ထှကျပွေး တိမျးရှောငျနရေကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ထှကျပွေးနရေသော ကြေးရှာမြားမှာ ပုဏ်ဏားကြှနျး- ရသတေ့ောငျ ကားလမျးမအနီးမှ ကြေးရှာမြားအပါအဝငျ ယငျး မွို့နယျအတှငျး ရနျကုနျ- စဈတှေ ကားလမျးမပျေါ ကြေးရှာမြားပငျပါဝငျကွောငျး ပုဏ်ဏားကြှနျးမဲဆန်ဒနယျမှ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးခငျမောငျလတျ က ပွောသညျ။ ဦးခငျမောငျလတျ က “အိုးအိမျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးရတဲ့ ရှာတှကေတော့ တျောတျောမြားတယျ။ တခြို့ ရှာတှဆေို ရှာနားမှာ တိုကျပှဲဖွဈလို့ပွေးတယျ။ တခြို့ရှာတှဆေို တပျမတျောစဈကွောငျးလာလို့ ပွေးတာရှိတယျ၊ ရှာထဲကို လကျနကျကွီး တှေ လာကလြို့ ပွေးတာ ရှိတယျ။ ရှာပေါငျး၂၀ နီးပါးလောကျက ပွညျသူတှေ အသကျလုပွီး ပွေးနရေတာ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
ယငျးပွငျ ရနျကုနျ -စဈတှေ ကားလမျးမပျေါတှငျ တညျရှိသညျ့ ကြောကျဆိပျကြေးရှာ၊ ဂူဝကြေးရှာနှငျ့ နတျခြောငျး၊ ရေ ပုတျခြောငျး၊ တနျးစှယျကြေးရှာသား အမြားစုမှာလညျးနီးစပျရာ ဆှမြေိုးသားခငျြးမြားရှိရာသို့ ထှကျပွေးခိုလှုံနရေ ကွောငျးလညျး သိရသညျ။ ထိုအထဲမှ တခြို့မှာ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့ပျေါရှိ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးမြားနှငျ့ ဒုက်ခသညျစခနျးတခြို့တှငျ ဝငျရောကျ ခိုလှုံနလေကျြရှိကွောငျးလညျး ပုဏ်ဏားကြှနျးမဲဆန်ဒနယျမှ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျသနျးတငျက ပွောသညျ။
ဧပွီလ ၁၃ ရကျ မနကျပိုငျးကလညျး အဆိုပါ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ကြောကျဆိပျကြေးရှာ အတှငျးသို့ လကျနကျကွီး ကညျြဆနျ ၃ လုံး ကရြောကျ ပေါကျကှဲမှုကွောငျ့ အရပျသား ၈ ဦး သဆေုံးခဲ့ပွီး ၁၀ ဦးကြျော ပွငျးထနျဒဏျရာမြား ရရှိခဲ့သညျ့အတှကျ လကျရှိအခြိနျအထိ ဆေးကုသမှုကို ခံယူနရေသညျ။ ဒသေခံ ကြေးရှာသားမြားနှငျ့ ထိခိုကျသဆေုံးသှားသူ မိသားစုဝငျမြားက အဆိုပါ ကြေးရှာအတှငျးသို့ ကရြောကျသညျ့ လကျနကျကွီးမှာ ကြေးရှာနှငျ့ ၂ မိုငျခှဲကြျောအကှာတှငျ တညျရှိသညျ့ ပုဏ်ဏားကြှနျး အခွစေိုကျ အမှတျ ၅၅၀ ခွမွေနျတပျရငျးမှ ပဈခတျခွငျးဖွဈသညျဟု ဆိုကွသညျ။ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ကြောကျဆိပျ ကြေးရှာ အတှငျး လကျနကျကွီး ကညျြဆနျ ကရြောကျ ပေါကျကှဲသညျ့ ဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျပွီး ရခိုငျအမြိုးသား ပါတီ (ANP) က ဧပွီလ ၁၇ ရကျ ရကျစှဲဖွငျ့ သဘောထားကွညောခကျြ တစောငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/202 0/04/25/2 21331.html
ထိုငျးနိုငျငံရောကျ မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြား ပွညျတျောပွနျသညျ့ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ တရားဝငျနယျစပျဂိတျဖွဈသညျ့ မွဝတီနယျစပျဂိတျမှသာ ဝငျရောကျသငျ့ပါကွောငျးနှငျ့ လကျရှိအခြိနျတှငျ Covid-19 ထိနျးခြုပျရေးအတှကျ ဘုရားသုံးဆူနယျ စပျဂိတျမှ ပွနျလညျဝငျရောကျပါကလညျး တရားဝငျ ပွနျလညျဝငျရောကျခွငျး ဖွဈစရေေးအတှကျ မွဝတီနယျစပျဂိတျမှသာ ဝငျ/ထှကျစရေေး ပူးပေါငျးကူညီဆောငျရှကျသှားရနျ မှနျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးနထှေဋျဦးက ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျကိုယျစား လကျမှတျရေးထိုး၍ ဧပွီလ(၂၁) ရကျစှဲဖွငျ့ မှနျပွညျသဈပါတီသို့ အကွောငျးကွားစာပေးပို့ခဲ့ကွောငျး မှနျသတငျးအဂေငျြစီက မိတ်တူ လကျခံရရှိခဲ့သညျ။
မှနျပွညျသဈပါတီ ပွညျတှငျးရေးရာဌာနတာဝနျခံ နိုငျဗညားလယျက “လာမယျ့ ဧပွီလ ၃၀ ရကျနောကျပိုငျးမှာ ပွနျဝငျလာမယျ့ လူတှကေ မွဝတီဘကျကနေ ဝငျလာမှာပါ၊ အစိုးရက သူတို့စီစဉျထားတဲ့ CBFQ မှာပဲ ထားမယျဆိုတော့ ကနြျောတို့ဘကျကို ရောကျဖို့က သိပျမရှိဘူးပေါ့လေ။ ဒါပမေယျ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရောကျလာခဲ့မယျဆိုရငျလညျး CBFQ မှာနဖေို့အတှကျက စီစဉျထား ပွီးသားပါ” ဟု မှနျသတငျးအဂေငျြစီနှငျ့ တှဆေုံ့မေးမွနျးခကျြတဈရပျတှငျ ဖွကွေားခဲ့သညျ။ ထို့အတူ COVID 19 ကူးစကျ ရောဂါအန်တရာ ယျ ကာကှယျထိနျးခြုပျနိုငျရေးအတှကျ ထိုငျးနိုငျငံမှ နရေပျပွနျမွနျမာအလုပျသမားမြားအနဖွေငျ့ တရားဝငျမွဝတီ နယျစပျဂိတျမှ ပွနျလာကွရနျနှငျ့ ဘုရားသုံးဆူနယျစပျလမျးကွောငျးဘကျသို့ ပွနျလာခှငျ့မပွုရနျ ဧပွီ ၂၅ ရကျစှဲဖွငျ့ မှနျပွညျသဈပါတီဗဟိုဌာနခြုပျက ဘုရားသုံးဆူမွို့နယျအုပျခြုပျရေးရုံးသို့ ညှနျကွားလိုကျသညျ။
ဧပွီ ၃၀ နောကျပိုငျး နယျစပျမှတဆငျ့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မဖွဈမနေ နရေပျပွနျရမညျ့ အလုပျသမားမြား အငျအား စာရငျးကို သိရှိပွီး အခကျအခဲမရှိစဘေဲ နရေပျပွနျနိုငျစရေေးနှငျ့ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ညှနျကွားခကျြမြားနှငျ့အညီ လိုအပျသညျ့ အစီ အမံမြား စီစဉျဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ https://forms.gle/kbxdZLLVbmDM7NYJ9 သို့ မပကျြမကှကျဖွညျ့သှငျး ပေးပို့ ကွပါရနျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဗနျကောကျမွို့ရှိ မွနျမာနိုငျငံအလုပျသမား သံအရာရှိရုံးက ယနရေ့ကျစှဲဖွငျ့ မွနျမာအလုပျသမားမြားအား မတ်ေတာ ရပျခံ အသိပေးနိူးဆျောထားကွောငျး တှရှေိ့ရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72454
ကခငျြပွညျနယျ ဖားကနျ့ဒသေမှာ ကြောကျမကျြတူးဖျောရေး လုပျငနျးခှငျတှမှောတော့ COVID-19 ကူးစကျပြံ့နှံ့မှုကို ကွိုတငျ ကာကှယျတဲ့ အနနေဲ့ ဝနျထမျးတှေ လုပျငနျးခှငျအပွငျထှကျခှငျ့ ပိတျထားပါတယျ။ အပွငျလူလညျး မဝငျရပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ လုပျငနျး ခှငျအတှငျး ကနျြးမာရေး စောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုမှုကိုလညျး ဆောငျရှကျထားတယျလို့ ဖားကနျ့မွို့နယျဆိုငျရာ ပွညျသူ့ လှတျတျောအမတျ ဦးတငျ့စိုးက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“ဒီကုမ်ပဏီဝနျထမျးတှဟော ဒီလုပျငနျးခှငျက လှဲပွီးရငျ သူတို့ကုမ်ပဏီဆိုကျရဲ့ အပွငျကို ထှကျခှငျ့ လုံးဝမရှိပါဘူးခငျဗြ။ ကုမ်ပဏီ အတှကျ နစေ့ဉျလိုအပျတဲ့ စားနပျရိက်ခာနဲ့ ပတျသကျပွီးမှ အဝယျထှကျတဲ့လူရယျ၊ ယာဉျမောငျးရယျ ဒီလူတှကေိုပဲ သူတို့ အပွငျ ထှကျခှငျ့ပေးပါတယျ။” ၂၄ နာရီ အခြိနျပွညျ့ အလုပျလုပျတဲ့ ကြောကျစိမျးတူးဖျောရေး လုပျငနျးခှငျတှမှော COVID-19 ကာကှယျတားဆီးရေးအတှကျ စီမံကိနျးခြ ကွပျမတျ ဆောငျရှကျနိုငျပမေယျ့လညျး ဒီ ကြောကျတူးဖျောရေး လုပျငနျးတှရေဲ့ မွစောပုံတှမှော ထောငျနဲ့ခြီတဲ့ ရမေဆေးကြောကျ ရှာကွသူတှအေတှကျတော့ ကာကှယျတားဆီးရေး မလုပျနိုငျပါဘူး။ ဖားကနျ့ကို အဝငျအထှကျလုပျမယျ့ ကားတှကေို ကွပျမတျဆောငျရှကျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ စှနျ့ပဈမွစောပုံတှထေဲမှာ ရမေဆေးကြောကျရှာဖှပွေီး စားဝတျနရေေး ရပျတညျကွတဲ့ လူထုအတှကျ အစိုးရရဲ့ COVID-19 ကာလ အထောကျအပံ့ ကလညျး မလုံလောကျဘူးလို့ ပွညျသူ့လှတျတျောအမတျ ဦးတငျ့စိုးက ပွောပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျး ကခငျြပွညျနယျမှာ ပထမဆုံး COVID-19 ကူးစကျခံ အတညျပွုလူနာတဦး စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ပွီးနောကျ လူထူထပျပွီး ထိနျးသိမျးရခကျတဲ့ ဖားကနျ့လို ဒသေမြိုးတှအေတှကျ စိုးရိမျနကွေတာပါ။ ရနျကုနျက စကျရုံတခုမှာ အလုပျလုပျခဲ့ပွီးနောကျ ကခငျြပွညျနယျ မိုးညှငျးကို ပွနျလာသူတဦးမှာ COVID-19 ကူးစကျခံထားရကွောငျး အတညျပွုခဲ့ပွီး မွဈကွီးနားဆေးရုံကို ပွောငျးရှေ့ ကုသပေးနကွေောငျး ကနျြးမာရေးနဲ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက တနင်ျဂနှနေညေ့က သတငျးထုတျထားပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/covid19-hpakant/5392976.html
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျရုံး၏ ဧပွီ ၂၁ရကျ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) ဘကျကိုသာ ထောကျပွထားပွီး မွနျမာ့တပျမတျောဘကျကို ထောကျပွထားခွငျးမရှိသဖွငျ့ မြှတမှုမရှိကွောငျး ခငျြးအဖှဲ့အစညျးအခြို့က ဝဖေနျကွသညျ။ ခငျြးပွညျ နယျ ပလကျဝမွို့နယျရှိ ပွညျသူမြားအတှကျ ရိက်ခာဆနျမြားကို ဧပွီ ၁၉ ရကျ နလေ့ယျပိုငျးတှငျ ရောကျရှိအောငျ ပို့ဆောငျနိုငျခဲ့သဖွငျ့ ဝမျးမွောကျကွောငျး ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ “ဒီ ထုတျပွနျခကျြက တဈဘကျကနကွေညျ့ ရငျတော့ ကောငျးပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ AA ဘကျကို ထောကျပွသလိုမြိုး မွနျမာ့တပျမတျောဘကျကိုလညျး အညီအမြှ မဟုတျ နိုငျရငျတော့ အနညျး အကဉျြးတော့ ထောကျပွသငျ့တယျလို့ ကနြျောမွငျတယျ”ဟုလညျး ခငျြးအမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ တှဲဖကျအထှေ ထှအေတှငျးရေးမှူး ဆလိုငျးကြဲအိုဘိချထောငျက ပွောသညျ။
ထုတျပွနျခကျြမှာ ထောကျပွမှုအပိုငျးတှငျ လိုအပျခကျြရှိနကွေောငျး၊ တပျမတျော၏ လကွေောငျးပဈခတျမှုကွောငျ့ တဈလ အတှငျး လူသုံးဆယျဝနျးကငျြ သဆေုံးခဲ့ရခွငျးမြိုးကိုလညျး ထောကျပွသငျ့သညျဟု မွငျကွောငျး ဆလိုငျးကြဲအိုဘိချထောငျက ဆိုသညျ။ “(တပျနှငျ့ AA ) နှဈဘကျစလုံးက စဈရာဇဝတျမှုကို ကြူးလှနျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ နှဈဘကျစလုံးကို တနျးတူ ထောကျပွသငျ့တယျလို့ မွငျတယျ” ဟု ဆလိုငျးကြဲအိုဘိချထောငျက ပွောသညျ။
ယငျးထုတျပွနျခကျြတှငျ ULA/AA က ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျအတှငျး အဖကျြအမှောငျ့လုပျရပျမြား လုပျဆောငျနေ သဖွငျ့ ပွညျသူလူထု၏ အသကျ၊ အိုးအိမျ၊ စညျးစိမျကို ထိနျးသိမျးကာကှယျစောငျ့ရှောကျနိုငျရနျအတှကျ အသကျစှနျ့ပွီး ရှပျရှပျ ခြှံခြှံ တာဝနျထမျးဆောငျလကျြရှိသော တပျမတျောသား အရာရှိ၊ စဈသညျမြားအားလုံးကို အသိအမှတျပွု ခြီးကြူးဂုဏျပွု ကွောငျး ပါဝငျသညျ။ ထို့ပွငျ အရပျသားမြား သဆေုံး/ဒဏျရာရရှိမှု ဖွဈစဉျမြား ကွားသိရသညျ့အတှကျ မြားစှာဝမျးနညျး စိတျမ ကောငျးဖွဈရကွောငျး၊ ၎င်းငျးတို့နှငျ့ မိသားစုဝငျမြားအတှကျလညျး နိုငျငံတျောအစိုးရအနဖွေငျ့ လိုအပျသညျ့ ပံ့ပိုးကူညီ ထောကျပံ့ မှုမြား ဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျးပါဝငျသညျ။
ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့မှ ဆနျနှငျးလနျြက “ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအနနေဲ့ ပလကျဝကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ထုတျပွနျခကျြတှေ ထုတျပွနျတာ တှရေ့တဲ့အတှကျ ဝမျးသာတယျ၊ ကွိုလညျးကွိုဆိုတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ထုတျပွနျခကျြတဈခုလုံးကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ သိပျအားမကောငျးဘူးလို့မွငျရတယျ”ဟု ပွောသညျ။ စဈပှဲမြားကွောငျ့ ကြေးရှာမြားမှ ဒသေခံမြားမှာ ပလကျဝမွို့နှငျ့ ဆမီးမွို့ တို့တှငျ စဈရှောငျနရေပွီး လကျရှိအခြိနျထိ ဆမီးတှငျ ၂၈၀ဝ ပလကျဝတှငျ ၃၆၅၇ ဦး ရှိကွောငျး သိရသညျ။ https://www. bnionline.net/mm/news-72380
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ညောငျရှမွေို့နယျရှိ အငျးလေးကနျကွီး ရခေမျးခွောကျမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဒသေခံမြား လယျယာ စိုကျပြိုးမှုခကျခဲနကွေောငျး ဒသေခံမြားက ပွောဆိုကွသညျ။ အငျလေးဒသေခံမြားသညျ လယျယာစိုကျပြိုးရေးနှငျ့ ခရီးသှား လုပျငနျးကို အဓိက အသကျမှေးဝမျးကွောငျး ပွုလုပျခဲ့သညျ။ “အငျးလယျတှေ ရခေမျးနတေဲ့အခြိနျမှာ စိုကျပြိုးရေး နဲ့ ပတျသကျပွီး လယျသမားတှကေ တျောတျောလေးကို ဒုက်ခရောကျပွီး စကျလှတှေနေဲ့ ခုတျပွီးမှ ရတေငျနရေတာ အဲ့ဒီလို အခွေ အနေ ဖွဈနတေယျ။ ရကေ တအားကို ခမျးနတော အဘ တို့ဒီမှာ အရမျးခကျခဲပါတယျ။ သှားရတဲ့ လမျးကွောငျးကလညျး ခကျခဲတယျ။” ဟု အငျးလေးဒသေခံ စိုကျပြိုးရေးတောငျသူ ဦးဖိုးလေး ကပွောသညျ။
တပေါငျး တနျခူးလအတှငျး မိုးမရှာခဲ့ပါက အငျးလယျရထေညျ့ခြိနျတှငျ အခကျအခဲဖွဈရပွီး လယျရသှေငျးရာတှငျလညျး ၃ ရကျ တဈခါ ရပွေနျခုတျတငျ နရေကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောဆိုကွသညျ။ “လယျထဲမှာ ရကေ ကွာကွာမနဘေူး ၃ ရကျ လောကျပဲနတေယျ။ ရကေ ပွနျခမျးရငျ ပွနျခုတျ ဝငျ့ ( မလိုအပျသညျ့မွကျပငျ) နုတျတဲ့ခြိနျမှာလဲ လယျထဲကို ရပွေနျထညျ့ရ တယျ” ဟုအငျးလေး ဒသေခံ တောငျသူ တဦးက ပွောသညျ။ အငျးလေး ရခေမျးခွောကျမှုသညျ နှဈစဉျ နှရောသီရောကျတိုငျး ကွုံတှရေ့သျောလညျး ယခုနှဈသညျ ပိုပွီးခမျးခွောကျကာ လယျယာအတှကျ အခကျအခုကွုံဒုက်ခရောကျကွောငျးလညျး အဆိုပါ တောငျသူက ဆိုသညျ။
“အငျးလေးကနျကလညျး ရခေမျး၊ လယျယာစိုကျပြိုးရေးကလညျး မလုပျနိုငျ၊ နောကျ ကိုဗဈကွောငျ့ ဧညျ့သညျကမရှိ။ ဝငျငှေ မရှိဘူး။ ဒီနှဈတော့ ဝငျငှတှေမေရှိဘူး။ အရမျးခကျခဲတယျ”ဟု အငျးလေးကနျကို မှီတငျးလုပျကိုငျနသေညျ့ မသန်တာ က ပွော သညျ။ အငျးလေး ဒသေခံ ပွညျသူမြားသညျ ခရီးသှားလုပျငနျးနှငျ့ တောငျယာ အလုပျအကိုငျ ကို အဓိက လုပျကိုငျသညျ့ သူမြားဖွဈသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16279
ပထမဆုံး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကူးစကျခံရသူတှရှေိ့ထားသညျ့ ခငျြးပွညျနယျ၊ တီးတိနျမွို့နယျ၊ ကပျတဲလျရှာသညျ မလေတှငျ တောငျ ယာခုတျမှု၊ စိုကျပြိုးမှုမပွုလုပျနိုငျပါက တဈနှဈစာရိက်ခာအခကျအခဲဖွဈနိုငျကွောငျး ခငျြးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ လူမှုရေး ဝနျကွီး ဦးပေါငျလှနျမငျ့ထနျက ပွောသညျ။ “ဒါပမေယျ့ ဒီကွားထဲမှာ အလုပျမလုပျနိုငျတာတှေ တောငျယာမခုတျနိုငျတာတှေ တော့ ရှိပါတယျ။ အဲဒီဂယကျက နောကျတဈနှဈမှာရှိလာနိုငျတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ နောကျလာမယျ့အခြိနျမှာ လာမယျ့နှဈမှာတော့ ဝမျးစာဖူလုံရေးက သကျသကျစဉျးစားရတော့မယျ။ ဝမျးစာဖူလုံရေးဆိုတာက ဘယျလိုဖွရှေငျးပေးနိုငျမလဲဆိုတာ အမြားကွီး စဉျးစားပေးရတော့မယျ။” ဟု ဦးပေါငျလှနျမငျ့ထနျ က ပွောသညျ။
လကျရှိတှငျ တဈပတျကို သုံးရကျခနျ့ မိုးရှာနပွေီဖွဈ၍ စပါးပြိူးကွဲမှုကို အစိုးရခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ တဈအိမျထောငျလြှငျ သုံး‌ယောကျ နှုနျးဖွငျ့ ပြိူးကွဲခှငျ့ ပေးထားသျောလညျး ပေါငျးရှငျးခွငျးကို ခှငျ့ပွုထားခွငျးမရှိကွောငျးသူက ဆိုသညျ။ “ မြိုးစခေ့တြာပဲရှိတယျ။ ကနျြတာက ပေါငျးရှငျးဖို့ ခှငျ့ပွုခကျြမရနိုငျဘူး။ သကျဆိုငျရာက ခှငျ့ပွုလိုကျတာက မြိုးစခေ့တြာလောကျပဲရှိတယျ။ တောငျယာ ဘကျမှာ ပေါငျးရှငျးဖို့ ဘယျသူမှ ခှငျ့မပွုသေးဘူး။ ခှငျ့ပွုမယျဆိုရငျ ကိုယျ့တောငျယာဆီသှားကုနျရငျ ရုတျရုတျသဲသဲဖွဈကုနျ မှာစိုးလို့ အဲဒီလို အတားအဆီးလုပျထားတာ။ ဆကျဖွဈမှာက အမြားကွီး တဈနှဈစာ ဝမျးစာအတှကျ ဒုက်ခရောကျကုနျမှာ။” ဟု ဦးဒိုဇှာတောငျ က ပွောသညျ။
ကပျတဲလျရှာသညျ အိမျခွေ ၆၉၄ အိမျရှိပွီး လူဦးရေ ၃၆၁၁ ဦးနထေိုငျကာ လယျဧက ၁၂၀ နီးပါးရှိပွီး မှေးမွူရေးနှငျ့ တောငျယာစိုကျပြိုးရေး လုပျငနျးကိုလုပျကိုငျကွပွီး အဓိကစိုကျပြိုးမှုအနဖွေငျ့ စပါး၊ ပွောငျးဖူးနှငျ့ ပဲမြားကိုစိုကျပြိုးကွောငျးနှငျ့ တမူးနယျစပျမှတဆငျ့ အိန်ဒိယသို့ အမြားဆုံးတငျပို့ကာ လေးပုံ တဈပုံသာ တီးတိနျမွို့သို့ တငျပို့ကွောငျးသိရသညျ။ http:// www.mizzimabu rmese.com/article/69344
ကအေိုငျအို ထိနျးခြုပျနယျမွေ လိုငျဇာမွို့အနီး မိုငျဆပျပါ Quarantine စငျတာတှငျ သီးခွားထားရှိကာ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ စောငျ့ကွညျ့ထားသူ ၁၈ ဦးရှိသညျ့အနကျ ၆ ဦး အိမျပွနျခှငျ့ရရှိပွီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ လကျရှိအခြိနျတှငျ ဖြားနာသညျ့ လူနာ မြား Quarantine စငျတာ နှငျ့ ဆေးရုံတို့တှငျ ထပျမံရောကျရှိလာခွငျး မရှိတော့ကွောငျး လိုငျဇာမွို့ COVID-19 ကာကှယျ တားဆီးရေးကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး ဦးဟိနျဝေါမျက ပွောသညျ။ “အကုနျလုံးက သတိထားပွီးနထေိုငျကွတာကို တှရေ့ပါ တယျ” ဟု ဦးဟိနျဝေါမျက ဆိုသညျ။
Quarantine စငျတာတှငျ သံသယလူနာ ၃ ဦးရှိပွီး ၎င်းငျးတို့ကို လိုငျဇာမွို့ရှိ သတျမှတျထားသညျ့နရောတှငျ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှုမြား ဆောငျရှကျပေးနကွေောငျး၊ ၎င်းငျးတို့တှငျ COVID ရောဂါပိုး မတှရှေိ့ရကွောငျး ဦးဟိနျဝေါမျက ပွောသညျ။ ”ပထမသံသယလူနာကို ကြှနျတျောတို့ ၂၄ နာရီအတှငျး ဆေးစဈတာ Negative ဖွဈပွီဆိုတော့ ကနျြတဲ့သူတှကေို မစဈတော့ ဘူး။ နှဈခါအတညျပွနျပွုတော့လညျး Negative ပဲဖွဈတော့ Negative ပဲလို့သတျမှတျလိုကျပွီ”ဟု ဦးဟိနျဝေါမျက ပွောသညျ။
သံသယလူနာမြားတှငျ ကိုယျပူသညျ့ လက်ခဏာမြားမတှရေ့တော့ကွောငျး နှငျ့ သတျမှတျထားသညျ့ Quarantine ရကျကာလ ကုနျလှနျပါက အိမျပွနျခှငျ့ရမညျ ဖွဈကွောငျးလညျး သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72446
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုကို ထိနျးခြုပျကာကှယျဖို့ ကွိုးစားနဆေဲကာလဖွဈပမေယျ့ ရပျနားထားတဲ့ လှတျတျော အစညျး အဝေးတှကေို မလေ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ ပွနျစဖို့ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျလိုကျပါတယျ။ တိုငျးပွညျအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ ဘတျဂတျြကိစ်စတှေ အတညျပွုဖို့ လှတျတျောချေါယူရတာဖွဈပွီး လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှအေတှကျ ကနျြးမာရေး ကာ ကှယျမှုရဖို့ ကွိုတငျပွငျဆငျမယျလို့ တာဝနျရှိသူတှကေ ပွောပါတယျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုအန်တရာယျကွောငျ့ ရပျနားထား ရတဲ့ ၁၆ ကွိမျမွောကျ ပွညျထောငျစုလှတျတျော အစညျးအဝေးကို မလေ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ စတငျကငျြးပမှာဖွဈပွီး ပွညျထောငျစု ဘဏ်ဍာငှေ အရသုံးနဲ့ ဖွညျ့စှကျဘတျဂကျြ အပါအဝငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျကုသရေးအတှကျ အသုံးပွုဖို့ ခြေးငှကေိစ်စ တှကေို ဆှေးနှေးဖို့ ရှိပါတယျ။
NLD ပါတီဝငျ၊ ပွညျသူ့လှတျတျော၊ လှတျတျောအခှငျ့အရေးကျောမတီက ဒေါကျတာ လှမိုးက အစိုးရက ဆောငျရှကျနတေဲ့ စီမံကိနျးတှေ မရပျတနျ့ဖို့ လှတျတျောက အတညျပွုပေးရမယျ့ ဘတျဂကျြကိစ်စတှရှေိတယျလို့ ပွောပါတယျ။ “ပွညျထောငျစု ဘဏ်ာရနျပုံငှရေဲ့ ဖွညျ့စှကျရနျပုံငှတှေကေို ဆှေးနှေး အတညျပွုကွမှာပါ။ ပွီးတော့ ခြေးငှတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဒါ အစိုးရက တငျလာခဲ့ရငျလညျး ကနြျောတို့က အတညျပွုပေးကွရမှာပါ။ မဟုတျလို့ရှိရငျ အစိုးရမှာ လကျရှိလုပျနတေဲ့ လုပျငနျး ဆောငျတာတခြို့က ရပျဆိုငျးသှားနိုငျပါတယျ။ လုပျနတေဲ့ စီမံကိနျးတှေ ဘာတှမှော လုပျရငျးတနျးလနျးနဲ့မှ လိုအပျခကျြရှိလာ တာတှေ ရှိတယျ။ ဥပမာ ဝနျထမျး တိုးမွှငျ့ ခနျ့ထားတာတှရှေိတယျ။ အရေးပျေါ စီမံခကျြတှရှေိတယျ။ ဒါတှအေတှကျ ဘတျဂကျြတှကေို ပွနျပွီးအတညျပွုပေးရမှာပါ။” ပွညျထောငျစုလှတျတျော၊ အမြိုးသားလှတျတျောနဲ့ ပွညျသူ့လှတျတျော အစညျးအဝေးတှေ ပွနျလညျကငျြးပဖို့ ဧပွီလ ၂၆ ရကျနေ့ မနကေ့ ထုတျပွနျခဲ့တာပါ။
နပွေညျတျောကိုပွနျလာတဲ့ အစိုးရ ဝနျထမျးတှနေဲ့ အရပျသားတှကေို စောငျ့ကွညျ့ရေး စခနျးတှမှော ၂၁ ရကျ အသှားအလာ ကနျ့သတျတာတှရှေိပမေယျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေိုတော့ အဲဒီပုံစံမြိုး ထားဖို့မရှိဘဲ တခွားနညျးလမျးတှနေဲ့ ကနျြးမာရေး စဈဆေးဖို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။ ပွညျထောငျစုလှတျတျောရုံး ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးကြျောစိုးက အစညျးအဝေး တကျရောကျမယျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေို သကျဆိုငျရာ နယျမွတှေမှော ကနျြးမာရေး စဈဆေးနိုငျရေး ညှိနှိုငျးဖို့ရှိ တယျလို့ ပွောပါတယျ။
ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ANP က ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါခငျစောဝကေ လှတျတျောတဈရပျ ချေါယူဖို့ ၂၁ ရကျ ကွိုတငျ အကွောငျးကွားရတာဖွဈလို့ အခုလိုရကျသတျမှတျတာဖွဈတယျလို့ ယူဆကွောငျးပွောပါတယျ။ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ SNLD ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးစိုငျးထှနျးအေးက ဒီလိုကာလမြိုးမှာလူစုလူဝေးနဲ့လုပျတဲ့ အစညျးအဝေးတှေ ရှောငျသငျ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။ SNLD ပါတီက လူငယျပိုငျး လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေတော့ လှတျတျောတကျရောကျဖို့ရှိပွီး လူကွီးပိုငျး လှတျတျော အမတျတှတေော့ တကျရောကျနိုငျခွငျး ရှိ၊ မရှိကို မသိသေးဘူးလို့လညျး ဦးစိုငျးထှနျးအေးက ပွောပါတယျ။ ကိုးကနျ့ ဒီမိုကရစေီနှငျ့ညီညှတျရေးပါတီ က ကှမျးလုံမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစား လှယျ ဦးယနျကငျြးကနျ က လိုအပျခကျြအရ လှတျတျော ချေါယူတာဖွဈလို့ ကနျြးမာရေး အစီအမံတှေ ပွငျဆငျထား မယျလို့ ယုံကွညျကွောငျး ပွောပါတယျ။
လှတျတျောကငျြးပရေး ဗဟိုကျောမတီ၊ လှတျတျောကငျြးပရေးလုပျငနျး အထောကျအကူပွု လုပျငနျးကျောမတီ ခုနှဈခု အနနေဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျထားတဲ့ညှနျကွားခကျြတှအေတိုငျး လှတျတျောချေါယူရေးဆောငျရှကျသှားမယျလို့ တာဝနျ ရှိသူတှကေပွောပါတယျ။https://www.rfa.org/burmese/news/hluttaws-will-start-on-may1804272020044936.html
ပလကျဝမွို့ပျေါရှိ စဈဘေးရှောငျ ပွညျသူမြားနှငျ့ ဒသေခံမြားအတှကျ စားနပျရိက်ခာအပါအဝငျ ဆနျအိတျပေါငျး ၂၀ဝဝ ကို တပျမတျော အကူအညီဖွငျ့ ပို့ဆောငျသှားမညျဖွဈကွောငျး ခငျြးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက ပွော သညျ။ “တပျမတျောကနေ မပို့ဘူးဆိုရငျ မရောကျနိုငျဘူးလေ။ အရပျဖကျကားတှကေ ဘယျသူမှ မသှားရဲကတြော့ ပထမ ဆနျအိတျ ၈၃၀ သယျတုနျးကတောငျမှ ကားသမားတှေ ကားဆရာတှေ မနညျးစညျးရုံးပွီးမှ ကိုယျတိုငျ ဆမီးမှာ သခြောပွငျဆငျ ခဲ့လို့သာ ရောကျသှားနိုငျတာ၊ အခုက ကားယာဉျမောငျးတှလေညျး မသှားရဲတော့ဘူး၊ အဲလိုဖွဈတဲ့အတှကျ တပျမတျော ကား တှကေနေ ကူညီပေးပွီး ပို့ပေးဖို့လိုတယျ၊ တပျမတျောက လုံခွုံရေးတှနေဲ့ ကားတှနေဲ့ ပို့ပေးမယျ့ အစီအစဉျတှေ လုပျနတေယျ”ဟုပွောသညျ။
စားနပျရိက်ခာမြားအပွငျ အခွားလူသုံးကုနျပစ်စညျးမြားလညျးပါဝငျပွီး၊ ၎င်းငျးပစ်စညျးတို့ကိုလညျး သယျယူပို့ဆောငျ ပေးနပွေီ ဖွဈ ကွောငျးသိရသညျ။
စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “ဆနျအိတျနှဈထောငျနဲ့ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ကွကျသှနျ အခြိုးကပြို့ဖို့ လုပျထားတယျ ။ ခေါကျဆှဲထုတျတို့ အိမျသာခှကျတို့ ဖိနပျတို့ ဆပျပွာတို့ ပို့ဖို့လုပျထားတယျ၊ အရငျပထမ အကွိမျ ၈၃၀ အိတျပို့ပေးပွီ၊ အခုဆနျအိတျ ၂၀ဝဝ ထပျပို့ မှာဖွဈတယျ။ နောကျပွီး ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကလညျး ဆနျအိတျ တဈထောငျ ပခုက်ကူကနပေို့ဖို့ လုပျနတေယျ။ ပလကျဝကို ရောကျရငျ အိတျသုံးထောငျ ရောကျမှာဖွဈတယျ”ဟု ပွောသညျ။ လကျရှိပလကျဝမွို့ပျေါတှငျ စဈဘေးရှောငျ လေးထောငျ နီးပါးရှိပွီး လမျးပမျးဆကျသှယျရေးပိတျဆို့မှုကွောငျ့ ရိက်ခာ ပွတျလပျနသေညျမှာ သုံးလဝနျးကငျြရှိပွီဖွဈသညျ။ https://www. bnionline.net/mm/news-72450
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီးမွို့ရှိ စဝျစံထှနျး ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသ ခံယူနသေညျ့ Covid-19 လူနာ အမှတျ (၂၉) ဆေးရုံ ဆငျ့ခှငျ့ရကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ အဆိုပါ လူနာ အမှတျ(၂၉)၏ ဓါတျခှဲနမူနာ ၃ ကွိမျ စဈဆေးရာ Negative ဖွဈကွောငျး ယနေ့ ဧပွီ ၂၇ ရကျနတှေ့ငျ ဆေးရုံမှ ဆငျးခှငျ့ပွုမညျဖွဈကွောငျး ပွညျနယျအထူးရောဂါ နိမျနငျးရေးဌာန လကျထောကျ ညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာနှငျးအိဖွူက သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ “Case -29 ကိုယျတိုငျကတော့ ၃ ကွိမျပွညျ့မှာ Negative ထှကျတယျ။ သူ့ကို ဒီနေ့ ဆေးရုံက ဆငျးခှငျ့ပေးတော့မယျ။ ဆေးရုံက ဆငျးပွီးတော့ facility quarantine ဟိုတယျ တခုမှာ တပတျထပျထားမယျ။” ဟု ဒေါကျတာနှငျးအိဖွူကပွောသညျ။
ဧပွီ ၂၇ ရကျနတှေ့ငျ လူနာအမှတျ ၂၉ ၏ မိသားစု ဝငျမြားကို ဓါတျခှဲနမူနာ ထပျမံ စဈဆေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “Case 29 ရဲ့ မိသားစုက ဒီနေ့ ၂၇ ရကျနမှေ့ာ ဓါတျခှဲ နမူနာ ထပျယူပွီးတော့ စဈမယျ”ဟု ဒေါကျတာနှငျးအိဖွူကပွောသညျ။ လူနာအမှတျ(၂၉)သညျ အသကျ (၂၆) နှဈ အမြိုးသားဖွဈပွီး အင်ျဂလနျပွနျ ဆရာဝနျတဈဦးဖွဈကာ အင်ျဂလနျနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံ သို့ မတျလ ၂၈ ရကျနကေ့ ရောကျရှိလာပွီး ရနျကုနျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျမှ တဈဆငျ့ မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျရှိ သတျမှတျ ထားသော Facility Quarantine ပွုလုပျခဲ့သူ ဖွဈသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16303
၁၉။ ကူညီထောကျပံ့မှု ယာယီရပျဆိုငျးခွငျးနှငျ့ အပွငျထှကျခှငျ့တားမွဈခံရခွငျးကွောငျ့ လီဒိုလမျး စဈရှောငျမြားအခကျ တှေ့
ကခငျြပွညျနယျ ဟူးကောငျ့ခြိုငျ့ဝှမျးဒသေ လီဒိုလမျးမပျေါရှိ စဈရှောငျစခနျးမြားတှငျ Covid-19 ကွောငျ့ စားနပျရိက်ခာခကျခဲ လာနကွေောငျး စခနျးတာဝနျခံမြားမှ သိရသညျ။ အောငျရာကြေးရှာနှငျ့ ရှဒူးဇှပျကြေးရှာရှိ စဈရှောငျပွညျသူမြားကို လာရောကျ ထောကျပံ့သညျ့ အဖှဲ့အစညျးမရှိတော့သညျ့အပွငျ စခနျးအပွငျထှကျ ရှာဖှစေားသောကျရနျလညျး အဝငျအထှကျ တငျးကွပျ လိုကျသဖွငျ့ ယခုလို ခကျခဲလာရခွငျး ဖွဈသညျဟု ရှဒူးဇှပျကြေးရှာ စဈရှောငျတာဝနျခံ Sara Htoi Aung ပွောသညျ။
“အခုခြိနျမှာ စဈရှောငျတှကေ အစားအသောကျအရမျးခကျခဲလာတယျ။ လိုအပျနတောကလညျး အခွခေံအစားအစာတှဖွေဈတဲ့ ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆားတှပေေါ့။ ကိုဗဈ-၁၉ ဖွဈပှားနတေဲ့အခြိနျဖွဈတဲ့အတှကျ ပိုဆိုးသှားတာပေါ့။ အပွငျထှကျလို့မရသလို နစေ့ားသှားပွီး အလုပျလုပျလို့လညျး မရတော့ဘူး။ နစေ့ားချေါလုပျမယျ့ သူတှလေညျး မရှိတော့ဘူး။ အရငျတုနျးကတော့ နထှေ့ကျအလုပျလုပျရ တော့ ထောကျပံ့တဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှမေလာရငျလညျး သိပျခကျခဲမှုမရှိဘူး။ အခုက အပွငျကို တဈညထှကျ အိပျတာနဲ့တငျ စခနျးကိုဝငျလို့မရတော့ဘူး။ အဲ့တော့ အခကျအခဲတှေ ပိုမြားလာတော့ပါ” ဟု ပွောသညျ။
စဈရှောငျစခနျးတညျရှိသညျ့ ကြေးရှာ ၂ခုမှာ ဝါရာဇှပျကြေးရှာအုပျစုအောကျတှငျရှိပွီး ပုံမှနျအားဖွငျ့ စခနျးအပွငျထှကျ အလုပျ လုပျကိုငျ စားသောကျနသေူမြားကွောငျး သိရသညျ။ မွို့ဖွငျ့ဝေးသညျ့ စဈရှောငျစခနျးဖွဈသောကွောငျ့ ဝယျယူထားသညျ့ အဖြားတိုငျးကိရိယာမြားပငျ အရညျသှေးမမှီသညျ့ ပစ်စညျးမြားဖွဈမညျကို စိုးရိမျကွောငျးစခနျးတာဝနျခံ တဈဦးပွောသညျ။
အောငျရာနှငျ့ ရှဒူးဇှပျ စဈရှောငျစခနျး ၂ ခုတှငျ စုစုပေါငျး လူဦးရေ ၂၀ဝ ခနျ့ ခိုလှုံနသေညျဟု သိရသညျ။ ၎င်းငျး စဈရှောငျမြားမှာ ၂၀၁၇ခုနှဈ နှောငျးပိုငျး တနိုငျးလီဒိုလမျးမတဈလြှောကျ တပျမတျောနှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA တို့ တိုကျပှဲပွငျး ထနျစှာဖွဈပှားခဲ့သောကွောငျ့ လကျရှိစဈရှောငျစခနျးတှငျ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျခဲ့သညျမှာ ၃ နှဈရှိလာပွီ ဖွဈသညျ။ https:// burmese.kachinnews.com/2020/04/24/%e1%80%80%e1%80%b0%e1%80%8a%e1%80%ae%e1
ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောမွို့နယျ တငျးမကြေးရှာမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလ ၂၂ ရကျနကေ့ တပျမတျောလုံခွုံရေးအဖှဲ့တှကေ မီးရှို့ဖကျြဆီးခံခဲ့ရတယျလို့ ဒသေခံတှကေ စှပျစှဲထားတဲ့ နအေိမျ ၅၀ဝ ကြျောကို ပွနျဆောကျနိုငျဖို့အတှကျ ငှကေပျြ သိနျး ၉၀ဝ ကြျောကို အစိုးရက ဧပွီလ ၂၂ ရကျနကေ့ ပေးအပျခဲ့တာပါ။ မီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့ နအေိမျတှအေတှကျ အဓိက ထောကျပံ့ပေးတာလို့ ရခိုငျပွညျနယျ ဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှုဦးစီးဌာန ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဝငျးဇျောဌေးက RFA ကို ဒီနပွေ့ောဆိုပါတယျ။
“ကြောကျတျောမွို့နယျ တငျးမကြေးရှာအုပျစု၊ တငျးမကြေးရှာမှာ လူနအေိမျ ၅၂၈ လုံး မီးလောငျခဲ့တယျ။ နအေိမျ ၃၉၇ လုံး အတှကျကို အိမျဆောကျပစ်စညျးတနျဖိုးငှေ ၇၉၄ သိနျး၊ ပွီးတော့မှ နအေိမျ ၁၃၁ လုံးအတှကျကို အိမျဆောကျပစ်စညျး တနျဖိုး ငှကေ ၁၃၁ သိနျးနဲ့ စုစုပေါငျး အိမျဆောကျပစ်စညျးတနျဖိုးငှေ ၉၂၅ သိနျးကို မွောကျဦးခရိုငျဘေးစီမံဌာနကနပွေီးတော့ ဧပွီလ ၂၂ ရကျက ကြှနျ တျောတို့ထောကျပံ့ပေးခဲ့ပါတယျ” ဝါးအိမျကို တဈသိနျး၊ သှပျမိုးပဉျြကာအိမျကို နှဈသိနျး၊ တိုကျအိမျတှကေို နှဈသိနျးခှဲ စသဖွငျ့ ဌာနရဲ့ သတျမှတျခကျြတှအေတိုငျး ထောကျပံ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။ နအေိမျတှေ မီးလောငျဆုံးရှုံးတာတှေ အတှကျ အခွားတငျပွလာတာတှရှေိရငျလညျး လုပျထုံးလုပျနညျးတှနေဲ့အညီ ဆကျလကျထောကျပံ့နိုငျအောငျ ဆောငျရှကျမယျ လို့ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဝငျးဇျောဌေးက ပွောပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလ ၂၂ ရကျနကေ့ တငျးမကြေးရှာမှာ ရှိတဲ့နအေိမျတှကေို တပျမတျောလုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှကေ ဝငျရောကျ မီးရှို့ခဲ့တယျလို့ ဒသေခံ ကြေးရှာသားတှနေဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေ သတငျးမီဒီယာတှကေို ပွောဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ ကြောကျတျောမွို့နယျက ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဦးထှနျးဝငျး ကတော့ မီးရှို့ခံရတဲ့ အခွားကြေးရှာတှလေညျး ရှိနပွေီး အခကျြအလကျတှေ ကောကျယူနတေယျလို့ပွောပါတယျ။
အခုလို တပျမတျောက ငွငျးခကျြထုတျထားတဲ့ မီးလောငျနအေိမျတှကေို ပွညျနယျအစိုးရက ငှကွေေးထောကျပံ့တဲ့ ကိစ်စ၊ ဒသေခံတှကေ တပျမတျောလုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှကေ မီးရှို့တာ၊ လကွေောငျးက ပဈခတျမှုတှကွေောငျ့ မီးလောငျတာဖွဈ ကွောငျး ပွောဆိုစှပျစှဲကွတဲ့ ကိစ်စတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ တပျမတျောဘကျ တုံ့ပွနျပွောဆိုခကျြရဖို့ RFA က တပျမတျောသတငျး မှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ကို အကွိမျကွိမျ ဆကျသှယျမေးမွနျးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ အခုအခြိနျအထိ ဆကျသှယျလို့ မရသေးပါဘူး။ ကြောကျတျောနဲ့ ပလကျဝမွို့နယျအစပျနားမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလဆနျးပိုငျးကနေ စတငျခဲ့တဲ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA)နဲ့ တပျမတျောတို့ရဲ့ ရကျပေါငျး ၄၀ ကြျောကွာတိုကျပှဲမှာ အရပျသား အမြားအပွားသဆေုံးခဲ့ပွီး နအေိမျအမြားအပွားလညျး မီးရှို့ ခံခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီဒသေက ဒသေခံ ၈၀ဝဝ ကြျောဟာလညျး ကြောကျတျောမွို့ပျေါမှာ ဒီနအေ့ထိ ထှကျပွေးခိုလှုံနကွေရဆဲ ဖွဈပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/govt-compensates-kyauktaw-houses-04242020073421.html
မှနျပွညျနယျအတှငျး ၁ လအကွာ ရပျနားထားတဲ့ ခရီးသှားကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုကို ပွနျလညျစတငျနပွေီလို့ ပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့က ပွောပါတယျ။
မှနျပွညျနယျမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ Covid 19 ရောဂါ စတငျဖွဈပှား မတျလအတှငျးမှာ လူမှုကယျဆယျရေးအဖှဲ့တှကေ ဦးဆောငျပွီး မွို့ဝငျဂိတျတှမှော ခရီးသှားကနျြးမာရေးစဈဆေးတာတှေ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အဲလို ကနျြးမာရေးစဈဆေးတာတှဟော မတျလကုနျမှာ ရပျနားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခုအခါ မှနျပွညျနယျဟာ Covid 19 ရောဂါနဲ့ ပတျသကျပွီး ကောငျးမှနျတဲ့အခွအေနတှေကေို ဆကျလုပျထိနျးသိမျးဖို့ ကနျြးမာရေး စဈဆေးတာတှကေို ပွညျနယျဝငျပေါကျ တှေ မှာ ပွနျလညျလုပျဆောငျနပွေီလို့ မှနျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးမွငျ့သနျးဝငျးက ပွောပါတယျ။
ခရီးသှား ကနျြးမာရေး စဈဆေးမှုတှကေို ဧပွီ ၂၆ ရကျကစပွီး ကြိုကျထိုမွို့နယျ အဝငျပေါကျမှာ ရနျကုနျတိုငျးနဲ့ ပဲခူးတိုငျးအပွငျ တခွားတိုငျးနဲ့ ပွညျနယျက ပွနျလာတဲ့သူတှကေို စတငျ စဈဆေးနတောပါ။ ဒါအပွငျ ကရငျပွညျနယျ ဘားအံနဲ့ ဘုရားသုံးဆူ ဝငျပေါကျတှကေနေ မှနျပွညျနယျ လာမယျ့သူတှကေို မျောလမွိုငျ စကျမှုဇုနျနဲ့ သံဖွူဇရပျမွို့နယျတှမှော ဗမာတိုငျးရငျးသား ရေးဝနျကွီးနဲ့ ကရငျတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး နှဈဦးက ဦးဆောငျပွီး ဌာနပေါငျးစုံပါဝငျတဲ့ ပူးပေါငျးအဖှဲ့က လာမယျ့အပတျ အတှငျး စတငျစဈဆေးသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။ အဲဒီလို စဈဆေးရာမှာ COVID-19 ရောဂါလက်ခဏာပွတဲ့သူတှကေို Quarantine ၂၁ ရကျ ထားရှိသှားမယျလို့ ဦးမွငျ့သနျးဝငျးက ပွောပါတယျ။
အခုလို ကနျြးမာရေး စဈဆေးတာတှကေို ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ ညှနျကွားခကျြနဲ့ ဆောငျရှကျနတောဖွဈပွီး မှနျပွညျနယျ အတှငျး ဝငျလာတဲ့သူမှနျသမြှကို ကနျြးမာရေး စဈဆေးတာနဲ့ အခကျြအလကျ ကောကျယူတာတှေ လုပျဆောငျနတေယျလို့ ကြိုကျထိုမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျက ဒေါကျတာခငျဆောငျက ပွောပါတယျ။ မှနျပွညျနယျမှာတော့ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ Covid-19 ရောဂါဖွဈပှားသူလူနာအမှတျ ၂၇ တဦးသာရှိနပွေီး အခုအခါရောဂါပိုးမရှိတော့ဘဲကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျ လာနပွေီလို့သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/384784
လူဦးရထေူထပျသော ဖားကနျ့ ရတနာမွသေို့ ဧပွီ ၂၅ရကျနောကျပိုငျး ဝငျရောကျလာသော မညျသူမဆို သတျမှတျထား သညျ့နရောတှငျ ၂၁ ရကျ Quarantine ဝငျရမညျဟု သိရသညျ။ ကခငျြပွညျနယျ ဖားကနျ့မွို့တှငျးသို့ ဧပွီလ ၁၁ ရကျနမှေ့ စတငျကာ အဝငျ အထှကျကနျ့သတျခဲ့ပွီးနောကျ ဒသေန်တရလိုအပျခကျြအရ ဧပွီ ၂၅ ရကျနမှေ့စကာ ဝငျရောကျလာသညျ့ မညျသူ မဆို သတျမှတျထားသညျ့နရောတှငျ Q ဝငျရနျ ထပျမံထုတျပွနျခဲ့ကွခွငျးကွောငျး ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးတငျ့စိုး ပွောသညျ။
“Q မလုပျဘူးဆိုရငျ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိဝငျထှကျခှငျ့ပေးထားသလိုဖွဈနတေဲ့ခြိနျကတြော့ ကနြျောတို့ တိုငျပငျပွီးတော့ ဘယျကဘဲ လာလာ ၂၁ ရကျ Q ဝငျရမယျ။ လကျရှိအနအေထားတော့ လူစီးကားတှဝေငျတာ အငျမတနျနညျးသှားပါပွီ။ အဓိက ဝငျနတော က ကုနျစညျစီးဆငျးမူအရ ကုနျကားတှေ၊ လောငျစာဆီသယျတဲ့ကားတှနေောကျပွီးတော့ တဈသီးပုဂ်ဂလအနနေဲ့ ကုနျကား သေးတှဝေငျတာလောကျဘဲ ရျှိပါတော့တယျ။ သီးခွားဝငျတာဆိုရငျ ဖားကနျ့မှာအိုးနဲ့ အိမျနဲ့အတညျတကနြတေဲ့သူတှေ ဝငျလာ တာရှိတယျ။ တဈကယျလို့ ကိုယျ့စရိတျနဲ့ကိုယျ Qဝငျနိုငျတယျဆိုရငျတော့ တကျလာပေါ့။ မဝငျနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ ရောကျတဲ့နေ ရာဘဲနပွေီး အခွနေကေောငျးမှဘဲပွနျတကျလာ ဒီလိုဘဲရှိတာပေါ့။” ဟု ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးတငျ့စိုး ဆိုသညျ။ ဖားကနျ့မွို့တှငျးသို့ဝငျသညျ့ ဂိတျပေါငျး ၄ခု ရှိပွီး လကျရှိအနအေထားအရ ကုနျကား၊ လောငျစာဆီကားမြားသညျ တဈရကျ လြှငျ အစီးရေ ၂၀ဝ ခနျ့ ပုံမှနျဝငျထှကျမှုရှိနသေညျဟု သိရသညျ။
“အားလုံးက ဒီ Covid-9 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျဖို့တှကျ သကျဆိုငျရာက တငျးတငျးကပျြကပျြဆောငျရှကျနတောတှရေ့ တယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခုရှိတာက Q ဝငျတဲ့သူတှကေို ကိုယျ့စရိတျနဲ့ကိုယျ ဝငျရမယျဆိုတော့ အဆငျပွတေဲ့သူရှိသလို အဆငျ မပွတေဲ့သူလညျး အမြားကွီးရှိနိုငျတယျ။ အဲကွောငျ့ဖွဈနိုငျရငျ Q ဝငျတဲ့သူတှကေို Q ကာလအတှငျး တဈကယျခကျခဲတဲ့သူ တှကေို ကူညျီပေးစခေငျြတယျ။” ဟု Green Land အရပျဘကျအဖှဲ့စညျးမှ ဒျေါခငျစနျးတငျ့ ယခုလိုပွောသညျ။
လကျရှိတှငျ ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျး လကျရှိ Q ဝငျသူစုစုပေါငျး ၃၀ဝ ကြျောခနျ့ရှိသညျ။ အစိုးရမှ လူ ၅ ဦးထကျ ပိုမစုရဟု အမိနျ့ထုတျထားသျောလညျး ဖားကနျ့ ကြောကျစိမျးမှျောတှငျ ရမေဆေးကြောကျရှာဖှနေသေူမြားမှာ ပုံမှနျရှိနဆေဲ ဖွဈသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/27/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျရောဂါ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုမရှိစဖေို့ လှိုငျကျောမွို့မှာ ၅ ရကျတဈေး ရောငျးခနြတေဲ့ နောငျယားဈေးကို ဧပွီ ၂၆ ရကျ နကေ့စပွီး ပုံစံပွောငျးရောငျးခစြပေါတယျ။ လူစုလူဝေးနဲ့ ကွပျသိပျမှု မရှိစဖေို့ ဈေးရောငျးသူတှအေတှကျ ၈ ပပေတျလညျ အကှကျရို ကျထားပေးပွီး ရောငျးခခြိုငျးထားတယျလို့ လှိုငျကျောမွို့ စညျပငျသာယာရေးကျောမတီ အမှုဆောငျအရာရှိ ဦးသနျးထှနျးက ပွောပါတယျ။ “ကနြျောတို့က အကှကျသဈရိုကျပေးလိုကျတာ အကှကျတှကေို၊ ကနြျော ၈ ပေ ပတျလညျ အကှကျလေးတှေ ပေးထားတာ။ ဒါပမေဲ့ တခြို့ကတြော့လညျး နညျးနညျးလေးပဲ လာရောငျးသူတှကေတြော့ ၈ ပအေကှကျမှာ ၄ ပေ ခွား နှဈယောကျ ယူတာပေါ့။ အဓိကကတော့ ကနြျောတို့က လူစုစုနဲ့ မဖွဈစခေငျြဘူး။ လူတယောကျနဲ့တယောကျ တိုးကွိတျပွီးမှ မဖွဈအောငျလို့ ကနြျောတို့က ဒီလို ခြဲပေး လိုကျတာပေါ့။ စနဈတကလြညျး ဖွဈသှားအောငျ၊ ရောငျးဝယျသူ တှလေညျး အဆငျပွအေောငျ လမျးသှားလမျးလာ တှေ အတှကျလညျး အဆငျပွအေောငျ အဲဒီရညျရှယျခကျြလေးနဲ့ လုပျတာပါ။”စညျပငျသာယာရေးကျောမီတီအနနေဲ့ ဈေးသညျ တှအေတှကျ ဈေးတှငျးဈေးပွငျ အကှကျ ၃၀ဝ ခနျ့ ရိုကျထားပမေယျ့ ဈေးသညျတှကေ ဒီထကျမက ပိုမြားနတေဲ့အတှကျ ရိုကျထားတဲ့အကှကျနဲ့ မလုံလောကျဖွဈတဲ့အတှကျ တခြို့မှာတကှကျ ၂ ယောကျ ရောငျးခရြတဲ့အနအေထားဖွဈနတေလို့လညျး ပွောပါတယျ၊
ပုံစံပွောငျးရောငျးခတြဲ့ ဈေးသညျတှအေတှကျ ထီးကိုတော့ MyTel က ထီး ၁၂၀ လာလှူထားပေးကွောငျးလညျး ဆိုပါတယျ။ နောငျယားဈေးဟာ ၅ ရကျတဈေး ရောငျးခတြဲ့ဈေးဖွဈပွီး ကယားပွညျနယျနရောအနှံ့က ဒသေခံတှေ သူတို့ဒသေထှကျ ပစ်စညျးတှေ လာရောကျရောငျးခတြဲ့ ဈေးတခု ဖွဈပါတယျ။ ဈေးရောငျးဈေးဝယျတှအေနနေဲ့ မဖွဈမနေ mask တပျဆငျဖို့ စညျပငျသာယာရေးအဖှဲ့က နှိုးဆျောထားပွီး မတပျရငျတော့ ဒဏျငှေ ၃၀ဝဝ ပေးဆောငျရမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ http://burm ese.dvb.no/archives/384611
မွနျမာ-တရုတျ နယျစပျ မူဆယျမွို့ ဟိုဆောငျရပျကှကျနှငျ့ တျောရှတျရပျကှကျကွား မင်ျဂါလာအောကျလမျးသှား ရှလေီမွဈအနီး ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျ တဈခုလေးတှငျ ဧပွီလ ၂၇ ရကျ နံနကျ ၆ နာရီ ဝနျးကငျြက တရုတျနိုငျငံသားတဈဦး လဲကြ သဆေုံးကွောငျး သိရသညျ။“ကြှနျတျော့ကို မနကျက ဆယျအိမျမှူးနဲ့ မီးသတျတှကေ ဖုနျးဆကျလာတယျ၊ နှလုံးလှကူညီမှု အသငျးကား လာချေါတယျ။ သဆေုံးသူက တရုတျနိုငျငံဘကျကလူ၊ ရထေဲက ကူးလာတာလား ဘယျလိုသလေဲမသိဘူး၊ သူပုံစံ ကွညျ့ရတာ ဘောငျးဘီနဲ့ဖိနပျမှာ ရတှေစေိုနတေယျ၊ မိုးရှာလို့ဘဲ စိုတာလား မသိရပမေယျ့ သဲတော့ နညျးနညျးပနေတေယျ၊ ဟိုဘကျကမျးကကူးလာတာလားတော့ သသေခြောခြာတော့ မသိဘူး”ဟု တျောရှကျရပျကှကျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးစိုငျးကြျောမွငျ့ က ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါ တရုတျနိုငျငံသားသညျ ရှလေီမွို့ နထေိုငျပွီး မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ရှလေီမွဈကိုဖွတျသနျး၍ ဝငျရောကျလာစဉျ လမျးပျေါ ၌ လဲကသြဆေုံးခဲ့ခွငျးဖွဈနိုငျပွီး သဆေုံးသူ တရုတျနိုငျငံသားအား နှဈနိုငျငံ တာဝနျရှိသူမြား ပူးပေါငျးစဈဆေးခဲ့ပွီး ရငျခှဲစဈဆေး မှု ပွုလုပျနိုငျရနျ မူဆယျပွညျသူ့ဆေးရုံသို့ နှလုံးလှ လူမှုကူညီရေး အသငျးကားဖွငျ့ ပို့ဆောငျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“ကြှနျတျောတို့ သမှေုသခေငျး ဖှငျ့ထားပါတယျ၊ သူကကနျြးအာရေး မကောငျးဘူး၊ နှလုံးရောဂါရှိတယျလို့ ရှလေီမွို့က သူ့ မိသားစုထံက စုံစမျးသိရပါတယျ၊ နှလုံးရောဂါရှိလို့ ဒီဘကျကမျးကိုကူးရငျး နှလုံးဖေါကျပွီး လဲကသြဆေုံးတယျလို့ ယူဆပါတယျ၊ တရုတျရဲဘကျက ပွောတာတော့ သူတို့ဘကျမှာ ဆေးစဈထားတာတော့ COVID-19 ရောဂါ မရှိဘူးလို့ ပွောပါတယျ” ဟု မူဆယျမွို့မရဲစခနျး စခနျးမှူး ဒုရဲမှူး သနျ့ဇျောဦးက ပွောကွားသညျ။ အဆိုပါ သဆေုံးသူ၏ ရုပျအလောငျးအား မူဆယျပွညျသူ့ ဆေးရုံက ရငျခှဲစဈဆေးနလေကျြရှိကွောငျး တာဝနျရှိသူ တဈဦး၏ ပွောကွားခကျြအရသိရသညျ။ https://news-eleven. com/article/170920
ဘားအံမွို့ပျေါတှငျ ဧပွီ ၂၅ ရကျ မှနျးလှဲ ၂ နာရီခနျ့က မိုးသကျလပွေငျးတိုကျခတျမှုကွောငျ့ နအေိမျတခြို့ ခေါငျမိုးလနျ ပကျြစီး မှုရှိခဲ့ပွီး ဓာတျတိုငျမြားလဲပွိုကာ လြှပျစဈမီး ပွတျတောကျမှုဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ “မိုးလပွေငျးထနျမှုက နာရီဝကျ လောကျပဲကွာပါတယျ။ အထကကြောငျးအရှမှေ့ာ ဓာတျတိုငျနှဈတိုငျလဲပွိုပွီး လမျးပိတျဆို့မှုဖွဈ ပျေါခဲ့လို့ မီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျ တှေ ရှငျးလငျးမှု ပွုလုပျနပေါတယျ။ လှာကမွငျကှကျသဈနဲ့ ဈေးမသှယျကှကျသဈဘကျမှာ လူနအေိမျ ငါးလုံးလောကျခေါငျမိုး လနျ ပကျြစီးမှုရှိခဲ့ပွီး လူထိခိုကျမူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး” ဟု ဘားအံမွို့ခံ တဈဦးက ပွောကွားသညျ။
ဘားအံမွို့တှငျ မိုးသကျလပွေငျး တိုကျခတျမှုမှာ နာရီဝကျခနျ့သာကွာမွငျ့ခဲ့ပွီး လပွေငျးတိုကျခတျမှုကွောငျ့ ဘားအံမွို့ တနျးမွငျ့ ကြောငျးလမျး၊ အထကကြောငျးအရှရှေိ့ ဓာတျတိုငျနှဈတိုငျ လဲပွိုခဲ့ပွီး လမျးပိတျဆို့ မှုဖွဈပျေါခဲ့ကာ 66 KV ဓာတျအား လိုငျးပွတျတောကျမှုဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/170671
၂၆။ တရုတျနိုငျငံဘကျမှ နယျစပျ ပိတျထားမှုကွောငျ့ မူဆယျမွို့နယျ မနျ့ဟီးရိုးမွို့တှငျ ပွောငျးဖူးတငျထျောလာဂြီ အစီး ၄၀ဝ ခနျ့ပိတျမိနေ
တရုတျနိုငျငံက COVID- 19 ရောဂါ ကနျြးမာရေးအခွအေနအေရ နယျစပျတဈလြှောကျ ပိတျထားမှုကွောငျ့ မွနျမာ တရုတျ နယျ စပျ မူဆယျမွို့နယျ မနျ့ဟီးရိုးမွို့အတှငျးရှိ နောငျဖိုငျနှငျ့ ခါးလှိုငျရှာအတှငျး ဧပွီ ၂၇ ရကျ မှစတငျကာ ပွောငျးဖူးတငျ ထျောလာဂြီ အစီးလေးရာခနျ့ ပိတျမိနပွေီး ဈေးနှိမျဝယျယူမှု့မြားရှိကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ပွောငျးဖူးမြားမှာ မူဆယျနမျ့ခမျးဒသေထှကျဖွဈပွီး လကျရှိတှငျ မွနျမာ တရုတျ နယျစပျရှိ ရှာခငျြးစပျနသေညျ့ နရောမြား ကိုပါ တရုတျနိုငျငံဘကျမှ အဝငျအထှကျအား တငျးကွပျလိုကျခွငျးကွောငျ့ အရောငျးအဝယျမြား ပွုလုပျရနျခကျခဲမှုမြား ဖွဈပျေါ နခွေငျး ဖွဈသညျ။“မနကေ့နဲ့ ဒီနအေ့ထိ အစီးပေါငျးလေးရာလောကျတော့ ပိတျမိနတေယျ။ အခုထိ သှားလို့မရသေးဘူး ခငျဗြား၊ တရုတျပွညျရှလေီ အာဏာပိုငျတှကေ တရုတျနယျစပျအကုနျလုံးကို ပိတျလိုကျတဲ့အခါကတြော့ နယျစပျတလြှောကျ မှာ နတေဲ့ တောငျသူလယျသမားတှအေကုနျလုံး တရုတျပွညျကိုဘဲ ရောငျးဖို့ဘဲ ရှိတယျလေ၊ အဲ့လိုအခါမြိုးမှာကတြော့ အကုနျလုံး က ပိတျမိနပွေီး ဝငျလို့မရဘူး ဖွဈနတေယျ” ဟု ပွောငျးဖူးစိုကျတောငျသူ စိုငျးမောဝျအှနျက ပွောကွားသညျ။
တရုတျနိုငျငံက နယျစပျတလြှောကျ တငျးကွပျသော အစီအမံမြား ခမြှတျကာ ပိတျထားပွီး ကုနျသှယျမှု မပကျြအောငျ ကုနျစညျ စီးဆငျးမှုကို ဖှငျ့ပေးထားကာ ပွောငျးဖူးရောငျးဝယျမှုကိုလညျး နားလညျမှုဖွငျ့ ခှငျ့ပွုထားခွငျးဖွဈသျောလညျး မူဆယျမွို့အတှငျး COVID- 19 တှရှေိ့ပွီးနောကျပိုငျး ပွောငျးဖူးရောငျးဝယျမှုအပျေါ တရုတျနိုငျငံဘကျမှ ပိုမိုးတငျကွပျမှုမြား ဆောငျရှကျနခွေငျးဖွဈ ကွောငျး သိရသညျ။ ယခုအခါ မနျ့ဟီးရိုးမွို့အဝငျရှိ နောငျဟငျ၊ နောငျမှနျ၊ နောငျချေါ၊ ကောငျးကှကျ၊ နောငျဖိုငျ စသညျ့ အဝငျ ပေါကျမြားကို ဒသေန်တရအမိနျ့ဖွငျ့ သှားလာမှု ကနျ့သတျထားကာ စကျလှဆေိပျမြားလညျး ပိတျထားကွောငျး မနျ့ဟီးရိုးမွို့နယျ အုပျအုပျရေးမှူးရုံးက သိရှိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/170957
၂၇။ ထိုငျးနယျစပျဂိတျမှတဈဆငျ့ နရေပျပွနျမညျ့ မွနျမာရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြား ကိုယျရေးအခကျြအလကျမြား ဖွညျ့သှငျး ရနျ လိုအပျ
မလေ ၁ ရကျနမှေ့စ၍ ထိုငျးနယျစပျဂိတျမှတဈဆငျ့ မွနျမာပွညျသို့ ပွနျလညျဝငျရောကျလာမညျ့ မွနျမာရှပွေ့ောငျး အလုပျ သမားမြားအနဖွေငျ့ ထိုငျးနိုငျငံဆိုငျရာ အလုပျသမားသံအရာရှိရုံးသို့ ကိုယျရေး အခကျြအလကျ မြားမပကျြမကှကျ ဖွညျ့သှငျး ရနျ လိုအပျမညျဖွဈကွောငျး ယနေ့ (ဧပွီလ ၂၆ ရကျ ) နစှေဲ့ဖွငျ့ အလုပျသမား သံအရာရှိရုံးက ထုတျပွနျ အသိပေးနှိုးဆျော လိုကျသညျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ မဖွဈမနေ နရေပျပွနျရမညျ့ အလုပျသမားမြား၏ အငျအားစာရငျးကို သိရှိရနျအပွငျ အခကျအခဲ မရှိစဘေဲ နရေပျပွနျနိုငျစရေနျနှငျ့ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ညှနျကွားခကျြမြားနှငျ့အညီ လိုအပျသညျ့ အစီအမံမြား စီစဉျ ဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ ယခုလို နှိုးဆျောတိုကျတှနျးခွငျးဖွဈကွောငျး အလုပျသမားသံ အ ရာရှိရုံးက ဆိုသညျ။
ဧပွီလ ၃၀ ရကျနေ့ နောကျပိုငျး မွဝတီ-မဲဆောကျ နယျစပျဂိတျ စတငျဖှငျ့လှဈပါက မွနျမာရှပွေ့ောငျး အလုပျ သမားမြားအနေ ဖွငျ့ အငျအားအလုံးအရငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျ ပွနျလညျဝငျရောကျပါက နရေပျပွနျ အငျအားနှငျ့ စိစဈ လကျခံနိုငျသညျ့ အငျအား ကနျ့သတျမှုရှိနိုငျခွငျး၊ ကနျြးမာရေး အခကျအခဲမြားဖွဈပျေါလာနိုငျခွငျး၊ ခရီးသှား လာစရိတျ၊ နထေိုငျစားသောကျစရိတျနှငျ့ အခွားမလိုလားအပျသော အုပျခြုပျမှုကိစ်စမြားဖွဈပျေါနိုငျခွငျးကွောငျ့ သံအရာရှိရုံးမှ ယခုလိုအသိပေးခွငျးဖွဈသညျ။
မွနျမာပွညျသားမြားအရေး ပူးတှဲလှုပျရှားမှု ကျောမတီ(JACBA) ဥက်ကဋ်ဌ ဦးမိုးကွိုးက “ဘနျကောကျမှာရှိတဲ့ အလုပျသမား သံ အရာရှိရုံးက ပေးလိုကျတဲ့ လူဦးရစောရငျးဇယားအတိုငျးပဲ ကားတှကေို စီစဉျပေးမှာဖွဈတယျ။ အဲ့ဒီ list ထဲမှာ မပါတဲ့သူတှကေ တော့ ကားတှအေစဈအဆေးခံရမှာပဲ။ အဲ့ဒီ list ထဲမှာပါတဲ့ အခါကတြော့ စနဈ ကတြယျလေ။ လမျးခရီးစဉျတဈလြှောကျမှာ
လညျး အရငျကလို မလိုလားအပျစှာသော အစဈအဆေး မေးမွနျးမှုတှေ ဘာတှေ တခါတညျးမရှိတော့ဘူး။” ဟု ကအေိုငျစီ သို့ ပွောသညျ။ အလားတူ စင်ျကာပူ၊ ထိုငျးနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံသို့ရောကျရှိပွီး ပွနျလာရနျ အခကျအခဲ ကွုံတှနေ့ရေသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသား မြားကိုလညျး အကူအညီလယောဉျဖွငျ့ ပွနျချေါရနျစီစဉျနကွေောငျး အဆိုပါသံရုံးမြားက ထုတျပွနျ ထားကွောငျးလညျး သိရ သညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1